NYI LYNN SECK 18+ DEN: June 2007
History of Myanmar's Animism
ဒုတိယအကြိမ်၊ ဧပြီလ ၂၀၀၄
စာမူခွင့်ပြု ၈၅၇/ ၂၀၀၃(၁၁)
နတ်ကိုးကွယ်မှု သမိုင်း ဆိုခြင်းထက် ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းဟု ဆိုခြင်းက ပိုမှန်မည်ဟု ထင်မိသည်။ မြန်မာပြည်လို ဘာသာရေးကို အခြေခံသော နိုင်ငံတွင် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာရေးက ရောနှောနေသည်။ ဤစာအုပ်တွင် မြန်မာတို့၏ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုများမှ လူများ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြသော နတ်ဒေဝတာများမှာ အိနဿဒိယ ဟိနဿဒူအယူဝါဒမှ နတ်ဒေဝါများ ဖြစ်ကြကြောင်း အထောက်အထား ကျမ်းဂန်စာပေများနှင့် တင်ပြထားသည်။ ဤစာအုပ်မှာ အတွင်း၃ရမင်း အတွင်း၃ရမင်းစသော နတ်များအကြောင်း ရေးထားသော စာအုပ်မဟုတ်သလို ကိုးကွယ်ပသနည်းများကို ရေးသားထားသော စာအုပ်လည်း မဟုတ်ချေ။ သိကြား၊ ဗြဟဿမာ၊ လောကပါလ၊ ဝိသကြုံ၊ မာတလိ၊ အသဿသဝဏ်၊ သူရသဿသတီ စသည့် နတ်များ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပုံကို သုတေသန ပြုထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဟိနဿဒူလူမျိုးတို့ အထွတ်အမြတ်ထားသော ဗေဒကျမ်းကြီး လေးကျမ်းကို မဆိုထားနှင့် ဗုဒဿဓဘုရားရှင် ပွင့်တှောမမူခင် ဘီစီ ၁၅၀၀ လောက်က ရေးသားခဲ့သည်ဆိုသော မဟာဘရတ ဇာတ်တှောကြီးတွင်ပင် အဆိုပါ နတ်များအကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာ ဗုဒဿဓဘာသာ လောကတွင် ဗြဟဿမာ၊ သျှီဝ၊ ဗိသဿသနိုးတို့ကို သိပ်မတွေ့ရသှောလည်း၊ သိကြား၊ ဝိသကြုံ၊ မာတလိ၊ ဧရာဝဏ်ဆင်၊ အသူရာ၊ သူရသဿသတီ စသည်တို့မှာ အထင်ကရ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရှေးခေတ်မင်းများဆိုလျှင် ဗြဟဿမဏ ပုဏဿဏားများကို နန်းတွင်းပရောဟိတ်များအဖြစ် ခန့်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပျူခေတ် ယဉ်ကျေးမှု၊ ပုဂံခေတ် ယဉ်ကျေးမှုများတွင်လည်း အဆိုပါ အငွေ့အသက်များ ကူးယှက်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ နတ်ဒေဝါများ ရှိခဲ့လျှင်လည်း အဆိုပါ နတ်ဒေဝါများမှာ အယူဝါဒ နှစ်မျိုး ဘုရားနှစ်ပါးကို ကိုးကွယ်မှု မပြုနိုင်ကြောင်း ချင့်ချိန်စဉ်းစား သင့်သည်။
ဤစာအုပ်သည် ဗြဟဿမဏဝါဒနှင့် ဗုဒဿဓဘာသာအကြား ရောယှက်နေမှုများကို ဖှောပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေး စာအုပ်ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ သုတေသန စာအုပ်ပုံစံသာ ဖြစ်သည်။ ဗြဟဿမဏယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းအရာများမှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုထားခြင်းများလည်း အလွန်နည်းပါးသည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သော ယင်းအကြောင်းများကို ယခုလို သိရသည်မှာ အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၂၄ဝခန့် ရှိသည်။ စာရွက်သားမှာ သာမန်သာ ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဖှောပုံများ မပါသည်က ဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤစာအုပ်သည် အကြောင်းအရာ အားဖြင့် ရှားပါးသော အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သလို စာအုပ် ပြုစုသူကလည်း ထိုဘက်တွင် ကျွမ်းကျင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် သိမ်းဆည်း ထားသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
Posted by NLS at 6/28/2007 05:18:00 PM0comments Links to this post
Book Review - ဘုံဘဝမှာဖြင့် ထက်ကြပ်မကွာ
ပထမအကြိမ်၊ မတ်လ ၂၀၀၇
စာမူခွင့်ပြု ၃၁၀၀၀ ၂၀၁၀၇
ဤစာအုပ်သည် သခင်တင်မြ၏ ကျှောကြားလှသော ဘုံဘဝမှာဖြင့် စာအုပ်၏ အဆက်ဟု ဆိုထားသည်။ သခင်တင်မြသည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် အနီးကပ် ပါဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အလံနီခေါင်းဆောင် သခင်စိုး၏ လက်ရင်း တပည့် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဘုံဘဝမှာဖြင့်ကို သခင်တင်မြသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့ပြီး ယခုစာအုပ်ကိုမူ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်မှ ရေးသားခဲ့သည်ဟု တွေ့ရပါသည်။ ဘုံဘဝမှာဖြင့် စာအုပ်မှာ သခင်တင်မြ၏ ကိုယ်တွေ့ အကြောင်းအရာများကို ရီတိုလ်ပုံစံ ရေးသားထားသောကြောင့် ဖတ်ရသည်မှာ အလွန်ကောင်းလှသည်။ ယင်းစာအုပ်သည် နိုင်ငံရေး စာပေလောကတွင် ထင်ရှားသော စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်ကိုတော့ ဘုံဘဝ၏ အဆက်ဟု ဆိုသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားခြင်း များစွာဖြင့် ဝယ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘုံဘဝမှာဖြင့် ထက်ကြပ်မကွာ ရေးသားချိန်ကို ဆန်းစစ်လိုက်လျှင် သခင်တင်မြ၏ အသက်ဂဝပိုင်းသို့ ရောက်နေပြီကို တွေ့ရမည်။ ပထမစာအုပ်ကို ရေးသားစဉ်က အသက် ၃ဂနှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသောကြောင့် ထိုစာအုပ်မှာ အားမာန် အပြည့်ပါသည်။ ဇာတ်ကြောင်းတွေကလည်း ခိုင်ခန့်သည်။ ယခုစာအုပ်တွင်တော့ ဇာတ်ကြောင်းများမှာ မခိုင်မာတော့။ ပိုဆိုးသည်မှာ ထိုစာအုပ်ကို သခင်တင်မြက သူ့နေရာမှ မရေးဘဲ သူ့ဇနီး နေရာမှ ရေးသားထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူထောင်ထဲ ရောက်နေစဉ်ကာလက သူ့ဇနီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များကို ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ သူ့ဇနီးနေရာမှ မရေးသားဘဲ သူ့နေရာမှသာ Narrator သဘောမျိုး ရေးသားမည်ဆိုလျှင် ယခုစာအုပ်မှာ ပိုမိုဖတ်ရှု၍ ကောင်းမည်ဟု ထင်မိသည်။ သူဘယ်လောက် ချောမောခန့်ညားပုံ၊ မိန်းခလေးများ နှစ်သက်ကြပုံ စသည်တို့ကို သူကရေးပြီး သူ့ဇနီးနေရာမှ ဖတ်ကြရသောအခါ စာရေးသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ အမွှန်းတင်လွန်းသလို ခံစားရလေသည်။ ဘုံဘဝမှာဖြင့်ကို အထူးတလည် ဖတ်ထားမိသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ယခုစာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၂ရဝခန့် ရှိသည်။ စာရွက်သားကောင်းသည်။ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၏ လမ်းခွဲကြပုံများအကြောင်း ပါသည်။ ဘုံဘဝမှာဖြင့်သည် ၁၉၄၅ခု ဩဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ်သွားသည်။ ယခုစာအုပ်တွင်တော့ ၁၉၆၂ ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ သခင်တင်မြနှင့် သူ့ဇနီး စတင်တွေ့ကြချိန် ၁၉၃၉ ဧပြီလလောက်မှ ၁၉၆၂ ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်ကြားက ၂၃နှစ်ကြာ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများဟု ယေဘုယျ ဆိုနိုင်သည်။ စာမျက်နှာများ၏ အောက်ခြေတွင် မှတ်စုများ ပါသောကြောင့် မှတ်သားရ လွယ်ကူစေသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံး၌ အကဿခရာဝလိစဉ် မပါသည်ကတော့ အားနည်းချက် ဖြစ်သည်။
အချုပ်ဆိုရလျှင် ကျွန်တှော့ အနေဖြင့်မူ ဤစာအုပ်ကို ဘုံဘဝမှာဖြင့်လောက် မနှစ်သက်မိပါ။ ယခင်စာအုပ်တွင် မပါသော မှတ်သားစရာ အချို့ ဖြည့်စွက် ပါလာသှောလည်း အများစုမှာ ယခင်စာအုပ်မှာ ဖတ်ရှုခဲ့ရပြီးများ ဖြစ်သည်။ သကဿကရာဇ်များ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ အမည်များကို တိတိကျကျ ရေးထားသောကြောင့် သခင်တင်မြသည် နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ရှိသူတစ်ယောက်ဟု ထင်မိသည်။ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူများ နိုင်ငံရေး သမိုင်း လေ့လာချင်သူများ အနေနှင့်မူ ဝယ်ယူသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်သှောလည်း သာမန်ဖတ်ရှုရန် အတွက်မူ တန်ဖိုး အနည်းငယ် မြင့်သောကြောင့် ချင့်ချိန် ဝယ်ယူသင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
Posted by NLS at 6/28/2007 05:09:00 PM0comments Links to this post
Discovery of India
ပထမအကြိမ်၊ မတ်လ ၂၀၀၆
အိနဿဒိယ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဂျဝါဟလာနေရူး၏ Discovery of India ဆိုသောစာအုပ်ကို သန်းစိုးနိုင်က ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ်မှာ နေရူး ဒေရာဒန် ထောင်ထဲတွင် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည် ချစ်သမီးသို့ ပေးစာများနှင့် The Glimpses of World History ဆိုသော ကမဿဘာ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း (ပါရဂူဘာသာပြန်) ဆိုသည့်စာအုပ်၏ အဆက်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ သူ၏ သမီးကို ကမဿဘာကြီးအကြောင်း၊ အိနဿဒိယအကြောင်း ပြောပြသော ပုံစံဖြင့် ရေးသားထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် အိနဿဒိယ၏ သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်ကို နေရူးသည် ဘဂဿငလီဘာသာနှင့် မဟုတ်ဘဲ အဂဿငလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စာအုပ်၏ ပထမပိုင်းမှာ နေရူး၏ တှောလှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း၊ အယူအဆများအကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများအကြောင်း များသည်။ ထိုအပိုင်းတွင် နေရူး၏ အဇဿဈတဿတအတွင်း ဖြစ်နေသော စိတ်ခံစားမှုများကို တွေ့နိုင်သည်။ မိသားစုနှင့် ခွဲခွာနေချိန် ကြာသောကြောင့် လွမ်းဆွတ်မှုများကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ထိုကာလတွင် သူ၏ဇနီးသည် ဆုံးပါးသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ စာသည် သွက်လာသည်။ မိမိ၏ ခံစားချက်များကို အိနဿဒိယဘက်သို့ လှည့်လိုက်သည်။ အခန်းသုံးမှစကာ နေရူး၏ ပညာကြီးမားမှုကို တွေ့ရတော့သည်။
နေရူးသည် အိနဿဒိယကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းပေးရာတွင် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးပင် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ အမြင်သည် ကျယ်ပြန့်လွန်းလှသည်။ သူသည် လွတ်လပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသည်သာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော အရာဟု မယူဆချေ။ တှောလှန်ရေးသမား ဘဝအဖြစ်နှင့်ပင် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရပြီးလျှင် လိုအပ်လာမည့် အရာများကို မြင်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ဤစာအုပ်ကို သမီးထံသို့ ရေးစာများ အသွင်ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နေရူးသည် အိနဿဒိယ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဇစ်မြစ်ကို နောကျေအောင် သိသည်။ ကျမ်းစာများ၊ ဥပနိသျှဒ်များကို ကျွမ်းကျင်လိမဿမာသည်။ ဘာသာရေးတွင် အစွဲအလမ်းမကြီးဘဲ ဝေဖန်ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ အခြားသော ဘာသာဝင်များကိုလည်း မနှိမ့်ချ။ ဟိနဿဒူဝါဒနှင့် ဝေဒကျမ်းဂန်များကို တန်ဖိုးထား လေးစားသည်။ ထိုအရာများကို စိပ်ပိုင်းဝေဖန်ပြသည်။ အိနဿဒိယ၏ ယဉ်ကျေးမှု နောက်ခံသမိုင်းကျောင်းကို လူနားလွယ်အောင် ရှင်းပြသည်။ အခြားသော နိုင်ငံများမှ အိနဿဒိယကို မြင်သော အမြင်ကို ဆန်းစစ်သည်။ ဗုဒဿဓနှင့် ဗုဒဿဓဘာသာတရားတှောကို သူအလွန်လေးစား မြတ်နိုးကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံကြပုံကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။ ကျမ်းဂန်များမှ အဆုံးအမများကို လက်ရှိ အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရှင်းပြထားသည်။
ကျွန်တှောသည် နေရူး၏ စာများကို ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း သူ့ကို ပို၍ပို၍ လေးစားလာမိသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံမှ တှောသော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟု ယုံကြည်လာမိသည်။ မြန်မာပြည်နှင့် အိနဿဒိယပြည်သည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် တချိန်တည်းလိုလို ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရတော့လည်း တချိန်တည်းလိုလိုပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက သူ၏ ခေါင်းထဲတွင် နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၊ ၂ဝဝအတွက် စဉ်းစားနေခဲ့ပြီ။ နိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေး ရသှောလည်း စာရိတဿတ၊ ပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ညီညွတ်ရေး မရှိလျှင် ဘာမှမထူးဆိုတာ သူသိသည်။ သူသိသလို ပြည်သူလူထုကို ရှင်းပြတတ်သည်။ ပညာပေးသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကြိုးပမ်းမှု ခေါင်းဆောင်များတွင် နေရူးလို ပုဂဿဂိုလ်မျိုးကို ကျွန်တှော မတွေ့ရှိခဲ့။ အားလုံးက နိုင်ငံရေးတွင် တှောလှန်ရေး တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးတည်နေကြသည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ရေးသောစာသည် အဖိုးတန် အကျိုးရှိလျှင် လိုက်နာမည့်သူ အများကြီး ဖြစ်သည်။ ဦးနုသည် လူငယ်များအတွက် ရုပ်စုံသမိုင်းဆိုသော စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးခဲ့သည်။ သို့သှော တစ်အုပ်နှင့်ပင် ရပ်သွားခဲ့သည်။ ဘာသာရေး စာအုပ်များရေးသှောလည်း သူ့အမြင်များသာ များသည်။ အတဿထုပဿပတဿတိဆန်ဆန် တာတေစနေသားကို ရေးသည်။ မိမိကောင်းကွက်များသာ များသည်။ ကျွန်တှောသည် နေရူးလို ခေါင်းဆောင်မျိုးကို အလွန်သဘောကျသည်။ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ထိုအရာများကို သိကောင်း သိပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် အများအကျိုးရှိအောင် ရေးသားပြောပြဖို့လည်း လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်တှောထင်သည်။ သူသည် စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ အနုပညာ ဘက်ပေါင်းစုံလိုလိုတွင် နှံ့စပ်သလို သူသိသမျှကိုလည်း ရေးသား ဝေငှသွားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် သူရေးခဲ့သော ဤစာအုပ်သည် ကမဿဘာကျှောနေပြီဖြစ်သည်။ အိနဿဒိယအကြောင်း လေ့လာမည်ဆိုလျှင် ဤစာအုပ်ကိုလည်း မဖြစ်မနေ လေ့လာကြရသည်။
နေရူး၏ အရေးအသားသည် ရှင်းလင်း ပြတ်သားသည်။ မူရင်းစာအုပ်တွင်လည်း အိနဿဒိယနိုင်ငံသားများ သုံးစွဲလေ့ရှိသော ခက်ခဲသည့် အဂဿငလိပ် အသုံးအနှုန်းများကို သုံးစွဲမထား။ သန်းစိုးနိုင် ဘာသာပြန် ထားသည်ကလည်း ပြေပြစ် ထိမိသည်။ ဖတ်လိုက်သည်နှင့် ဦးနှောက်ထဲကို တန်းဝင်သွားသည်။ အိနဿဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှု ကူးလူးခြင်း များစွာ ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွင် အိနဿဒိယဟန်များ အများအပြား လွှမ်းမိုးခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာ့ ဘာသာရေးတွင် အိနဿဒိယ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများ များစွာ ပတ်သတ် ဆက်နွယ်နေသေးသည်။ ဤစာအုပ်တွင် အိနဿဒိယကို တွေ့နိုင်သည်။ နေရူးကို တွေ့နိုင်သည်။ ဤစာအုပ် ဖတ်ပြီးလျှင် နေရူး၏ အခြားစာအုပ်များကိုပါ ရှာဖွေဖတ်ရှုချင် လာလိမ့်မည်။
ဘာသာပြန်ပြီးသော နေရူး၏ စာအုပ်များ
Posted by NLS at 6/28/2007 05:02:00 PM0comments Links to this post
Myanmar Blog Book
မြန်မာ ဘလော့ခ်ဂါတွေ စုစည်းပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် စီစဉ်နေတာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ အရုပ်ထင်လာပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ မြန်မာဘလော့ခ်ပေါင်း ၄ဝဝကျှောထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ကဗျာ၊ ဝတဿထု၊ ဟာသ၊ အတွေးအမြင်၊ နည်းပညာ၊ ဆောင်းပါး၊ အင်တာဗျူး၊ ဝတဿထု စတာတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းနိုးရာရာ ဆိုရာမှာလည်း စီစဉ်သူ ဘလော့ခ်ဂါတွေကို တစ်ဦးစီ သီးခြား ဘလော့ခ်တွေခွဲပြီး နှစ်သက်ရာပိုစ့်တွေ ရွေးချယ်ထားတာမို့ ရွေးချယ်သူအလိုက် အကြိုက်တွေ ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ခ်ဂါတွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပိုစ့်တွေကို ရွေးချယ်ထားခြင်းမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ပြရရင် ဥတဿတရလမင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ ခံစားသူအကြိုက် ဝတဿထုများပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန် အခြေစိုက် ကိုစိုးဇေယျ၊ ကိုနေဖုန်းလတ်နဲ့ မစဿစတာပုရှ် တို့က အဓိက ဦးဆောင် စီစဉ်နေကြတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်တာမှာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ မဂဿဂဇင်း၊ ဂျာနယ်တို့မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖှောပြမခံရတဲ့၊ မဂဿဂဇင်း ဂျာနယ်တွေကို စာမူမပို့တဲ့ စာရေးကောင်းသူ ပညာတတ်တွေ အပြင်မှာ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ မဂဿဂဇင်း တစ်စောင်ကို စာမူ သွားပို့တဲ့အခါ ဘယ်နေ့ဘယ်လမှာ စာမူရွေးချယ်မယ်လည်း သေချာမသိရ၊ နာမည်ရ အခြားစာရေးဆရာ များကိုလည်း ရုတ်တရက် ဝင်တိုးဖို့ မလွယ်တာမို့ အဆိုပါ စာရေးသူတွေဟာ အခွင့်အရေး မရကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဒါတွေကို အမြဲ ပို့နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ခ်တွေ တည်ထောင်ပြီး ကိုယ့်စာကိုယ်ရေး၊ ကိုယ်အယ်ဒီတာလုပ်၊ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဝေသူ လုပ်ပြီး အင်တာနက်ကနေ အခမဲ့ ဖြန့်ချီကြပါတော့တယ်။
ဘလော့ခ်ဟာ မီဒီယာ တှောလှန်ရေးလို့ ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး သတင်း ရချင်လား၊ နည်းပညာတွေ အကြောင်း သိချင်လား၊ ရသစာပေ ဖတ်ချင်လား၊ ကဗျာတွေ ဖတ်ချင်လား၊ ဘာသာရေးအကြောင်း သိချင်လား ဘာမဆိုအားလုံး အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မဂဿဂဇင်းတွေမှာ ပါတဲ့ သတင်းတွေဟာ တှောတှော့ကို နောက်ကျနေတဲ့ သတင်းပါ။ နောက်ဆုံး သတင်းကို မရနိုင်ပါဘူး။ ဘလော့ခ် လောကမှာတော့ နာရီနဲ့အမျှ မိနစ်နဲ့အမျှ သတင်းတွေ ရနိုင်တယ်။ အချက်အလက် အသစ်တွေ အတွေးအခှေါ အသစ်တွေကို၊ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေကို ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ခ် အားလုံးဟာ ကောင်းတယ်၊ သတင်းမှန်တယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ခ်တစ်ခုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Identity တစ်ခု ဖြစ်လာတာမို့ ဘလောခ့်ဂါ တှောတှောများများဟာ အတွေ့အကြုံ များလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့် Identity ကိုကိုယ် ထိန်းနိုင်ဖို့ သတင်းမှန်၊ အချက်အလက်မှန်တွေ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားလာကြတာ တွေ့ပါတယ်။
တချို့တွေက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကိုယ်သိထားတဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အတတ်ပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေငှတယ်။ စာနယ်ဇင်းတွေလို ကိုယ့်စာမူပါလာဖို့ စောင့်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စာမူကိုယ်တည်းဖြတ်ပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ခံကာ အခမဲ့ ဝေငှနေကြတာပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘလောခ့်တွေကို ဖတ်မယ်ဆိုရင် မဂဿဂဇင်းတွေတောင် ဖတ်စရာ မလိုတော့လောက်အောင် အကြောင်းအရာ စုံလင် များပြားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အင်တာနက် သုံးနိုင်ရုံနဲ့တင် တစ်ကမဿဘာလုံးကို တခဏအတွင်း ဖြန့်ချီနိုင်တာမို့ ဖြန့်ချီရေး အတွက် ပိုက်ဆံကုန်ဖို့ရာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။
ဒီစာအုပ်ဟာ ဘလော့ခ်ဂါတွေ များစွာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ရွေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ စာအုပ် ဒီဇိုင်းကို ဘလော့ခ်ဂါတွေပဲ လုပ်ကြတယ်။ စာမူစီစစ်တာကိုလည်း ဘလော့ခ်ဂါတွေပဲ လုပ်ကြတယ်။ ထုတ်ဝေရေး အတွက်လည်း ဘလော့ခ်ဂါတွေ ရန်ပုံငွေစုပြီး အကုန်ခံကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ဟာ ထူးခြားတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာပြည် စာနယ်ဇင်းတွေမှာ မရေးသားပေမယ့် ရေးအားကောင်း၊ တွေးအားကောင်း၊ ပညာတတ်၊ အစွမ်းထက်သူတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by NLS at 6/27/2007 04:26:00 PM0comments Links to this post
Labels: Blogger, Book, News
မြန်မာယူနီကုဒ် အဖွဲ့အစည်းကနေ မြန်မာယူနီကုဒ် ဗားရှင်းသရီး (Myanmar3) ဆိုတာ ထွက်လာပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီယူနီကုဒ်မှာ ပါဠိ၊ သကဿငရိုက် ဘာသာတွေကိုပါ ရိုက်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြား Application အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ အခု စမ်းသုံးနေပါပြီတဲ့။ ကျွန်တှော ပြောခဲ့သလိုပဲ အရင်က မိုင်မြန်မာ မိုင်မြန်မာနဲ့ အခုတော့ မြန်မာ၃ ပြန်ဖြစ်သွားကြပြန်ပြီ။ ကျွန်တှော လေ့လာမိသလောက်တော့ မြန်မာသရီးဟာ မြန်မာ့သဒဿဒါစနစ်ကို တှောတှော လိုက်နာထားတာ တွေ့ပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာစာမှာ ယပင့်၊ ရရစ်၊ ဝဆွဲ ဆိုတာတွေဟာ သီးခြား အကဿခရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယပင့်ဆိုတာ ယဆိုတဲ့ အကဿခရာနဲ့ ပင့်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ရရစ်ဆိုတာ ရကို ရစ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဝဆွဲဆိုတာ ဝကို တွဲထားတာ ဖြစ်တယ်။
ယူနီကုဒ် စနစ်မှာ ယပင့်၊ ယရစ်၊ ဝဆွဲ၊ ဟထိုး ဒီလေးမျိုးအတွက် သီးခြား တန်ဖိုးပေးမထားပါဘူး။
ကျား = က+ * + ယ +ာ+း
ကျား = 1000 1039 101A 102C 1038
ဒီနေရာမှာ 1039 ဆိုတာက ယ ကို ယပင့်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သကေဿငတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက Coding ရေးတဲ့အခါမှာ သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူက လိုက်ရိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း ယပင့် ရရစ်ကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ စာလုံးတွဲပုံစနစ်ကို မြင်သာအောင်သာ ပြထားတာပါ။
ဒီယူနီကုဒ် စနစ်မှာ အပင့်၊ အရစ်၊ လုံးကြီးတင်၊ သေးသေးတင်၊ တချောင်းငင်၊ ဝစဿစပေါက်၊ အောက်မြစ် စတာတွေအတွက် နေရာမှန်ပှေါအောင် သီးခြားလက်ကွက်တွေ မှတ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဥပမာ ဇှောဂျီစနစ်မှာ အောက်မြစ်ဟာ (h,Shift+Y,Shift+U) သုံးနေရာမှာ ရှိတယ်။ တစ်ချောင်းငင်နဲ့ နှစ်ချောင်းငင် အတိုအရှည်အတွက် နှစ်နေရာစီ ရှိတယ်။ မြန်မာ၂ယူနီကုဒ်မှာတော့ တစ်ခုစီပဲ ရှိပါတယ်။ ဝဆွဲ ဟထိုး ဆိုရင်လည်း သီးခြားလက်ကွက် မထားပါဘူး။ ဝဆွဲရိုက်ပြီး ဟထိုးဆက်ရိုက်ရုံနဲ့ ဝဆွဲဟထိုး ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သေးသေးတင်+ တစ်ချောင်းငင်+ အောက်မြစ် အတွဲမှာတော့ အောက်မြစ်ဟာ တစ်ချောင်းငင်နဲ့ သွားဆက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သေးသေးတင် မပါဘဲ တစ်ချောင်းငင် အောက်မြစ် ဆိုရင်တော့ သူ့အလိုလို နေရာချဲပေးသွားပါတယ်။ ဒါကလည်း အနည်းငယ် ပြင်ဆင်လိုက်ရင် ရမယ့် ကိစဿစမျိုးပါ။
ဌ နဲ့ ဋဿဌ မတူပါဘူး။ ဌဆိုတာ ဌ တစ်လုံးတည်း ဖြစ်တယ်။ ဋဿဌ ဆိုတာက ဋ နဲ့ ဌ နှစ်လုံးတွဲထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ- မုဋေဿဌာ ဆိုတာက မုဋ်+ဌော ကိုပေါင်းပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖတ်တဲ့အခါလည်း မုဌောလို့ မဖတ်ဘဲ မုတ်ဌောလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဌာန ဆိုတာကိုတော့ ဌာနလို့ပဲ ရေးရတယ်။ ဋဿဌာနလို့ ရေးရင် မမှန်ပါဘူး။
မြန်မာစကားမှာ စာလုံးတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆင့်တဲ့အခါ အောက်ဖှောပြပါပုံအတိုင်း ဆင့်ရပါတယ်။
က ခ ဂ ဃ င
စ ဆ ဇ ဈ ည
ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ
တ ထ ဒ ဓ န
ပ ဖ ဗ ဘ မ
ယ ရ လ ၀ သ
ဟ ဠ အ
အနီရောင် ပြထားတဲ့ ပထမ၊ တတိယနဲ့ ပဥဿစမ စာလုံးတွေက အပှေါမှာ အမြဲရှိရပါမယ်။ ကျန်တဲ့ စာလုံးတွေက သူတို့ အောက်မှာသာ နေရမယ်။ တကယ်တော့ ဍဿဎ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်တဲ့အခါ ဍရင်ကောက်ဟာ ဎရေမှုတ် အထဲကို ဝင်မနေသင့်ပါဘူး။ ဎရေမှုတ်ဟာ ဍရင်ကောက်ရဲ့ အောက်မှာသာ နေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစာအဖွဲ့က စာတည်းမှူး ဦးမြတ်ကျှောရဲ့ မြန်မာအကဿခရာ ရေးသားနည်းစနစ်မှာတော့ ဒီလို ထပ်ရေးတဲ့အခါ ဎရဲ့ ပုံပန်းသဏဿဍာန်ကို မပျက်စေဘဲ ဍဿဎ လို့သာရေးရမယ်လို့ ဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ အဘိဓာန်ကျမ်းမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ ရေးထားတာ တွေ့ရလို့ ဒီ ဍဿဎ ရေးသားမှုကတော့ စည်းမျဉ်းကို မလိုက်နာဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ကျွန်တှော့ရဲ့ အမြင်နဲ့ဆို အပြည့်အဝ မှန်ကန်တယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အကဿခရာ စီကြည့်တဲ့အခါ ဒီလို ထွက်လာပါတယ်။
မြန်မာအဘိဓာန် | မြန်မာယူနီကုဒ် | ဇှောဂျီ
က က က
ကကုသန် ဘုရား ကကူရံငါး ကိ
ကကူရံငါး ကကုသန်ဘုရား ကဲ
ကကြီး ကက်ကရာ ကဲ့
ကကြိုး ကကဿကရုပန်း ကဲ့
ကကြိုးတီးလုံး ကကြိုး ကဏဿဍ
ကကြိုးတန်ဆာ ကကြိုးတန်ဆာ ကီ
ကခုန် ကကြိုးတီးလုံး ကူ
ကချလာ ကကြီး ကံ
ကချေသည် ကချင် ကံ့
ကချှောကချွတ် ကချင်ပြည်နယ် ကဲ့ဝှက်
ကချင် ကချလာ ကံ့ကူဆံ
ကချင်ပြည်နယ် ကခုန် ကံ့ကူတံ
ကစား ကချေသည် ကဏဿဍကမြင်းတှော
ကစားခုန်စား ကချှောကချွတ် ကံကြမဿမာ
မြန်မာအဘိဓာန် အကဿခရာစီပုံနဲ့ မတူတာကို တွေ့မှာပါ။ ပထမ (က)တွေ တူတယ်။ ဒုတိယ (က)မှာ ဗျည်းတွဲတွေ တွဲတဲ့အခါ စမှားပါတော့တယ်။ နှစ်ချောင်းငင်ဟာ တစ်ချောင်းငင်ရဲ့ အထက်မှာ ရောက်နေတယ်။ ဗျည်းတွဲတွေ မပြီးခင်မှာ (ကက်ကရာ) ဆိုတဲ့ အသတ်စဉ် ဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ အကဿခရာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက် စီရာမှာ ပြသဿသနာ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ သဒဿဒါအရ မှန်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာစနစ် ပြောင်းလဲရာမှာလည်း အခက်အခဲ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီယူနီကုဒ် စနစ်ဟာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မြန်မာကနေ အဂဿငလိပ်၊ အဂဿငလိပ်ကနေ မြန်မာ ဘာသာစကား Translation လုပ်ရာမှာလည်း အဆင်ပြေအောင် ကြံစည်ထားတယ်လို့ ကျွန်တှော ယူဆပါတယ်။ ဥပမာ မောင်ဘကို အဂဿငလိပ်လို ပြောင်းတဲ့အခါ Maung Ba ဒါမှမဟုတ် Mg Ba လို့တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ လောလောဆယ် သူတို့ရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ သွားကြည့်တဲ့အခါ ယူနီကုဒ် ဗားရှင်းသရီးကို တင်မထားသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် မစမ်းသပ်နိုင်သေးပေမယ့် အဲဒီဗားရှင်းဟာ အခုစမ်းသပ်တဲ့ ဗားရှင်းတူး အပှေါမှာသာ အဆင့်မြှင့်ထားတယ် ဆိုတာကြောင့် ယူနီကုဒ်သရီးဟာ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ မျှောလင့်ရပါတယ်။ Font Face အနေနဲ့ကတော့ ဇှောဂျီလို၊ ဝင်းဖောင့်တွေလို သိပ်မလှပပါဘူး။ ပြီးတော့ အသုံးပြုထားတဲ့ Keyman ကလည်း အခမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by NLS at 6/27/2007 04:16:00 PM0comments Links to this post
Photoshop It! Wounded Leaf
Click Images to see Larger size
Posted by NLS at 6/24/2007 06:33:00 PM0comments Links to this post
I invite you all to come and visit my Photo Gallery. And let me tag with your albums as well.
Visit My Picasa Album
Posted by NLS at 6/23/2007 04:49:00 PM0comments Links to this post
အချစ်ရေး ကိစဿစဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်နှင့် သူ၏ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးသော ကိစဿစတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ အချစ်သည် လူတို့၏ အသက်ရှင်ရေး အတွက်သှောလည်းကောင်း၊ စိတ်ကျသေဆုံးရေး အတွက်သှောလည်းကောင်း သက်ဆိုင်နေရုံမျှမက လူ့မှုဘဝကြီး သာယာ ပျှောရွှင်ရေး၊ ညစ်နွမ်းပျက်ပြားရေးကိုလည်း ဖြစ်ပှေါစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချစ်ရေးကို ဗျူဟာကျကျ ဂရုတစိုက် စေ့စပ်စွာ လုပ်ဆောင်ကြရမည်။ အချစ်ရေးကို သုံးသပ်ရာတွင် မရှိမဖြစ် အခြေခံ အချက်ကြီး ငါးချက် ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ
စိတ်ဓါတ်ရေးရာ လွှမ်းမိုးခြင်း။ အချစ်ရေး တစ်ရပ်ကို စတင်သောအခါ မိမိဘက်တှောသားများနှင့် တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်ရန်လိုသည်။ စည်းလုံးမှု ရှိရန်လိုသည်။ မိမိအပှေါတွင် အကောက်မကြံစေရန် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ရမည်။ သူတို့အပှေါတွင် မိမိကောင်းကြောင်း သူတို့ယုံကြည်နေစေ ရမည်။ အသားထဲမှ လောက်ထွက်ပြီး မိမိသူငယ်ချင်းများ သစဿစာဖောက်သောကြောင့် ဒုကဿခရောက်ကြရသော သာဓကများ များစွာ ရှိခဲ့ဖူးပြီ။ ဤပွဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပါက မိမိဘက်တှောသားများ၊ ကူညီခဲ့သူများကို ပြန်လည် ကျေးဇူးပြုရန် မမေ့ရ။ ထိုက်တန်စွာ အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးဆပ်ရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် နောက်တစ်ခါ သင်ကြိုးပမ်းသောအခါ ထိုသူတို့က သင့်အား ဒုကဿခလှလှ ပေးကြလိမ့်မည်ဟုမှတ်။ ထို့ကြောင့် စစ်ဆင်ရေး စကတည်းက ဘက်တှောသားများကို မိမိဘက်က သေချာစေရန်၊ မိမိကို ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီ ပေးစေရန် စည်းရုံးထားရမည်။
အခြေအနေ။ ဂုဏ်ဒြပ်၊ ပညာ၊ စည်းစိမ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘာသာရေး စသည်တို့သည်လည်း အချစ်ရေးတွင် အဓိကထား ထည့်တွက်ရမည့် အချက်များ ဖြစ်သည်ကို မမေ့လျော့ရ။ ခရစ်ယာန်ချစ်သူကို ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် စာအုပ် လက်ဆောင် မပေးရ။ ဘုရားသို့ အတင်း ခှေါမသွားရ။ ချမ်းသာသော သူ့မိဘများရှေ့တွင် ပဒေသရာဇ်စနစ်၊ ဘူဇွာစနစ်များအကြောင်း မပြောရ။
ဒေသ။ မိမိကြံစည်မည့်သူ၏ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဖုံးနံပါတ်၊ ဆေးခန်း၊ ရဲစခန်း၊ အရက်ဆိုင် ရှိမရှိ၊ အနီးအနားတွင် ကိုယ့်လို စစ်ဆင်နေသူ ရှိမရှိ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာထားရမည်။ ဥဒဟရုဏ် ဆိုရသှော သင့်ချစ်သူသည် သင့်ရှေ့တွင် ခြေခေါက်လဲပြီး ဒူးပြဲသွားသောအခါ ဆေးခန်းသွားမည်ဆိုပါက ထိုဒေသအား သင့်လေ့လာ မထားလျှင် ဆေးခန်း ဘယ်နားရှိမည်မှန်း သိမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အတူ သင့်ချစ်သူအိမ်ရှေ့တွင် အရက်ဆိုင် ရှိနေတာကို ဂရုမပြုမိဘဲ ညအချိန်မတှော ဂစ်တာတစ်လက်ဖြင့် သီချင်း တဒေါင်ဒေါင် သွားအှောပါက ပုလင်းစာမိမည်မှာ အမှန်ပင်။
ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်း။ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အချစ်ရေး မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ဘူးဟု သင်ထင်နေပါက သင်၏ အချစ်ရေး အောင်မြင်လိမ့်မည် မဟုတ်။ ခေါင်းဆောင်မှုတွင်
စသည့် အချက်များ ပါဝင်သည်။
ဉာဏ်ပညာရှိခြင်း ဆိုရာတွင် ပညာတတ်ခြင်းကို မဆိုလို။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရုတ်ချင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်စေခြင်း စသည့် အချက်များကိုသာ ဆိုလိုသည်။ ကိုယ့်ချစ်သူသည် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ မင်းသားမင်းသမီးများကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ပါက ထိုအကြောင်းအရာများကို နှုတ်တက်အာဂုံ ဆောင်ထားပါ။ ကိုယ်စိတ်မဝင်စားလည်း စိတ်ဝင်စားချင်ယောင် ဆောင်ထားပါ။ သူတစ်ခုခု မသိသောအခါ ကိုယ်က ပြောပြနိုင်ပါစေ။ ကိုရီးယား သီချင်းများ၊ မင်းသားမင်းသမီး ဓါတ်ပုံများကို ရှာပေးပါ။ မရလျှင် ဝယ်ပါ။
ရိုးသားခြင်း ဆိုရာမှာလည်း ရိုးရိုးအအ ထုံထိုင်းထိုင်းကြီး လုပ်ပြနေဖို့ မလိုပေ။ ကိုယ်ဖြစ်နေသည့်အရာ ဖြစ်ချင်သည့်အရာကို ရိုးရိုးသားသား ပြောပြဖို့ပင်။ ကိုယ်ဖျားနေလျှင် ဖျားနေကြောင်းပြောပါ။ ဖျားနေလျက်နှင့် သင့်ချစ်သူလုပ်ချင်ရာ၊ သွားချင်ရာကို လိုက်ပို့ လိုက်လုပ်ပေးမည်ဆိုလျှင် ကားသှောလည်း တိုက်မည်၊ ကောင်မလေး၏ စကတ်ပှေါ အန်ချင်လည်း အန်မိသွားလိမ့်မည်။ ထိုအခါ မျက်နှာမရ ခြေထောက်ရ ဖြစ်တတ်သည်ကို သတိချပ်ရမည်။ သို့သှောလည်း အရာတိုင်းတွင် ရိုးရိုးဘွင်းဘွင်းကြီး သွားဖွင့်ပြောတိုင်းလည်း မကောင်းပေ။ လက်ဝါးစာ မိလိမ့်မည်။ ရိုးသားပါစေ မိတ်ဆွေ။
စာနာတတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကြံစည်နေသူ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ချစ်သူကို စာနာခြင်း၊ မိမိအပေါင်းအသင်းများကို စာနာခြင်း၊ သူ၏ အပေါင်းအသင်းများကို စာနာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင်ဘယ်လောက် သူ့ကိုချစ်ကြောင်း၊ သူ့ကြောင့် ဘယ်လောက် ခံစားနေရကြောင်း၊ မနေနိုင်တော့ကြောင်း စသည့် အကြောင်းပေါင်းများစွာကို လူကိုယ်တိုင်တဖုံ တယ်လီဖုန်းနှင့် တသွယ် ညစဉ်ညတိုင်း သူငယ်ချင်းများအား ရင်ဖွင့် တိုင်ပင်နေလျှင် ထိုသူတို့လည်း နားငြီးကာ စိတ်ရှုပ်ထွေး လာပေလိမ့်မည်။ ဖီလင်အပြည့်ဖြင့် ကောင်မလေးအိမ်ကို ညတစ်နာရီလောက်မှ ဖုန်းတွေဆက်လျှင်လည်း သူ့မိဘများမှာ အိပ်ရေးပျက်ကာ သင့်ကို မကြည်လင်သလို သူတို့သမီးကို ဆူမည်မှာ မလွဲချေ။ ထို့ကြောင့် စာနာစိတ် ထားရမည်။
သတဿတိ ဟူသည် မိုက်ရူးရဲခြင်းမဟုတ်။ ကောင်မလေးအား ဟေ့ဒီမှာကြည့်ဟုဆိုပြီး လက်ဖျံကို ဓါးဖြင့်ခြစ်ပြီး သူ့နာမည် ရေးပြသည်မှာ သတဿတိမဟုတ်။ အရူးထခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးနှင့် ပြသဿသနာ တက်လျှင်သှောလည်းကောင်း သူ့မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပြသဿသနာ တက်လျှင်သှောလည်းကောင်း ကိုယ်က ရှေ့တန်းက ရဲရဲရင့်ရင့် ဖြေရှင်းပြရမည်။ သူငယ်ချင်းများကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကိုယ်က ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး လုပ်မနေရ။ အနည်းဆုံး သင်ကောင်မလေးကို လိုက်လံစကား ပြောနေစဉ် ခွေးတစ်ကောင် ဝင်ကိုက်ပါက ထွက်မပြေးရ။ ကောင်မလေးကို ကာဗာ ယူမထားရ။ နာချင်နာပါစေ ဘယ်လောက် ကြောက်နေပါစေ အကိုက်ခံလိုက်ပါ။ သို့တည်းမဟုတ် ခွေးကို ဆောင့်ကန်ပါ။
စည်းကမ်းရှိခြင်း ဆိုသည်မှာတော့ သင်က သူ့ထံကို ညရှစ်နာရီတိုင်း ဖုန်းဆက်သည်ဆိုလျှင် ထိုအချိန်ရောက်တိုင်း မှန်မှန် ဆက်ပေးရမည်။ ရည်းစားမဖြစ်မီ သူငယ်ချင်းများကို မဟုတ်မဟတ် သွားမကြွားထားရ (သူပြန်ကြားလျှင် သင့်ကို အလွန်တရာ စိတ်ဆိုးပေလိမ့်မည်)။ ရည်းစားမဖြစ်သေးဘဲ အတင်းကာရော လက်သွားမကိုင်ရ။ ချင့်ချိန်ပါ။
အထက်ပါ အချက်များကို မသိသော မလိုက်နာခဲ့သော စုံတွဲဟူ၍ တှောတှောရှားသည်။ ယင်းသဘောကို နားလည်သူသာ ကိုယ်လိုချင်သော အရာကို အောင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက မုချ ရှုံးနိမ့်မည်ပင်။
သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ကိုယ့်ကိုကူညီနိုင်သူ ဟူသမျှကို သူ့နေရာနှင့်သူ လိုက်ဖက်မည့်သူကို သင့်တှောသလို စီမံခန့်ခွဲပြီး အကူအညီတောင်းပါ။ မည်သူက သူဖတ်သော စာကြည့်တိုက်တွင် စာဖတ်လေ့ ရှိသနည်း။ မည်သူက သူတက်သော သင်တန်း တက်နေသနည်း။ မည်သူက သူနှင့် အလွန်ရင်းနှီးသနည်း။ မည်သူက သူရင်ဖွင့်တတ်သော အဖှောနည်း စသည်တို့ကို လေ့လာပြီး သက်ဆိုင်သူအလိုက် အသုံးချပါ။
အလုံးစုံသော အချစ်ရေး ကိစဿစများမှာကား စင်စစ် လှည့်စားမှုများ အပှေါတွင် အခြေခံသည်။ ကိုယ်က မလုပ်ချင်သှောလည်း လုပ်ချင်သည့်ဟန် ပြရမည်။ ကိုယ်ကမစားချင်သှောလည်း စားချင်သည့်ဟန် ပြရမည်။ ကိုယ်က ငိုချင်နေသှောလည်း ရယ်ပြရမည်။ ကိုယ်က ရယ်ချင်နေသှောလည်း မျက်နှာညှိုးနေစေရမည်။
ပြသဿသနာ မပှေါခင် သင့်ချစ်သူကို ပြသဿသနာ အမြည်းအစမ်း ကျွေးရမည်။ သူပျှောရွှင်နေချိန်တွင် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းပြောပါ။ သူစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေချိန်တွင် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရာများ အားပေးပါ။ ထိုအခါ သူလည်း နောင်အခါ ပြသဿသနာ ဖြစ်လာလျှင် လွယ်လွယ်နှင့် ကြောက်ဒူး တုန်နေတော့မည်မဟုတ်။
သင်ကြံစည်နေသူ ကြိုက်တတ်သည့် အရာများနှင့် မျှားခှေါရမည်။ သင့်ကောင်မလေးက စာအုပ်ကြိုက်တတ်လျှင် သင့်မှာ စာအုပ်ပုံကြီး ရှိနေပါစေ။ သင့်ကောင်မလေးက အဝတ်အစား ကြိုက်တတ်လျှင် ချေးငှားပြီး ဈေးကြီးကြီး ဝယ်ပေးလိုက်ပါလေ။ ကျုံးသွင်းရမည်။ သူကြိုက်သောအရာများ သင်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ကြိုက်သည်ဟု ထင်နေပါစေ။ သူ့ကြောင့် ကိုယ့်ဘဝကြီး ဦးတည်ရာမဲ့နေဟန် ပြရမည် (မိန်းမများသည် သူတို့ကြောင့် ကတိမ်းကယိုင် ဖြစ်နေသည်ကို မြင်လျှင် သဘောကျတတ်၏)။ သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ချစ်၍သှောလည်းကောင်း မုန်း၍သှောလည်းကောင်း သင့်အကြောင်းများသာ ကြီးစိုးနေပြီဆိုလျှင် သင်အိုကေတော့မည် ဖြစ်သည်။
သူ့ဘက်က အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်နေလျှင် ထိပ်တိုက် မတိုးဝင်ပါနှင့်။ ထိုးမည့်ဆင် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ် ဆိုသည့် စကားကို သတိရပါ။
မိမိဘက်တွင် ကူညီမည့်သူ၊ ဖေးမမည့်သူ မရှိဟန် ဆောင်ပါ။
သူ့သူငယ်ချင်းများက သင့်ကို မလိုလားဘူးဆိုလျှင် ထိုသူငယ်ချင်းများကို နည်းအမျိုးမျိုး သုံးပြီး ဖြိုခွဲပါ။ အုပ်စုကွဲအောင် လုပ်ပါ။ သင့်ကြောင့် ဆိုတာကိုတော့ မသိပါစေနှင့်။
သင့်ချစ်သူ ထင်မထားသော အရာများကို လုပ်ပြပါ။ မမျှောလင့်သော အရာများ လုပ်ပြပါ။ ကိုယ့်ကို လူရှေ့သူရှေ့ ပြင်းထန်စွာ တုန့်ပြန်လာလျှင် ချက်ချင်း မတုန့်ပြန်ဘဲ အငိုက်ဖမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သူမလုပ်နိုင်သော အရာတစ်ခုခုကို ကိုယ်က လုပ်ပြခြင်းဖြင့် သူ့ကို အနိုင်ယူနိုင်သည်။
ကိုယ့်လျှို့ဝှက်ချက်များ အစီအစဉ်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် တိုင်ပင်မှုများကို မပေါက်ကြားအောင် ဂရုပြုပါ။
မိမိ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ သူမ၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို အဘက်ဘက်မှ သုံးသပ်ရမည်။ မိမိဘက်က အလေးသာလျှင် အောင်မြင်မှုရဖို့ များသည်။ မိမိဘက်က အရေးမသာလျှင် ရှုံးနိမ့်နိုင်သည်။ စေ့စပ်သေချာသော တွက်ဆခြင်း မပါလျှင် သင့်အချစ်ရေးသည်လည်း မအောင်မြင်နိုင်။ အောင်ပွဲနှင့် လွဲချှောမည်။ အထက်က ဖှောပြခဲ့သော အချက်များကိုသာ တိတိကျကျ လိုက်နာမည်ဆိုလျှင် အောင်ပွဲသည် သင်နှင့် လက်တစ်ကမ်း အလိုမှာပင် ရှိနေပြီဟု မှတ်ရမည်။
အထက်ပါ အချက်များမှာ ဆွန်ဇု၏ အချစ်မဟာဗျူဟာကျမ်းမှ ပထမဆုံး အခန်းတစ်ခန်းသာ ရှိသေးသည်။ အချစ်ရေးရာသည် ရှုပ်ထွေးမှု ရှိသည်။ လှည့်စားမှု များစွာလည်း ရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားသူသည် ဆွန်ဇု၏ The Art of War စာအုပ်ကို ဆက်လက်လေ့လာ ကြပါကုန်။
The Art of War Sun Tzu
စစ်အောင်နိုင်ရာသော အကြောင်းကြီးများ ကန့်သတ်စာစဉ်
Posted by NLS at 6/23/2007 04:30:00 PM0comments Links to this post
How do we make natural leaf to creative leaf
ကိုယ်လိုချင်သော သစ်ရွက်ကို ပထမ ရယူပါ။
ကျွန်တှော ယူထားသော သစ်ရွက်မှာ အလင်းအမှောင် တူနေသောကြောင့် အလင်းအမှောင် ပေးပါသည်။ သစ်ရွက်ကို လိုအပ်သလို နေရာပြင်ပါ။
သစ်ရွက်သီးသန့်ကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး ပထအဆင့် အရွက်လေးရွက် ဆက်သည်။ ထိုလေးရွက်ကို လေယာတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းသည်။
ပထမပေါင်းထားသော အရွက်လေးရွက် လေယာကို နောက်ထပ် တစ်လေယာတွင် ထပ်ပွားယူပြီး ၄၅ဒီဂရီ နေရာလှည့်သည်။ အဆင့်၎ ပုံကို ကြည့်ပါ။
ဖန်တီးထားသော သစ်ရွက်လေယာ နှစ်ခုစလုံးကို Blending Mode Pinlight ထားပေးရမည်။ ထိုအခါ အဆင့်၅ ပုံကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်ကို မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုအဆင့်တွင် Clt+U ကိုအသုံးပြုပြီး ကာလာများ ပြောင်းနိုင်ပါသေးသည်။ နှစ်သက်လျှင်လည်း ထိုအဆင့်မှာပင် ရပ်လို့ရသည်။ ပုံ၆ကို ကြည့်ပါ။ ယခုပုံတွင်တော့ အနည်းငယ် ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
သစ်ရွက်လေယာ နှစ်ခုကို Selection လုပ်ပြီး ၎င်းလေယာ နှစ်ခု၏ အောက်ခြေတွင် အနီရောင်လေယာ တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်သောအခါ ပုံရကဲ့သို့ ရလာမည် ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ထိုသစ်ရွက်လေယာ နှစ်ခုနှင့် အနီရောင်လေယာတို့ကို ပေါင်းလိုက်ပါသည်။ ပြီးလျှင် Blending လုပ်ပြီး အရိပ်အနည်းငယ်ချပေး လိုက်လျှင် ပုံဂကဲ့သို့ လိုချင်သောပုံကို ရလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော အရောင်များကို လိုချင်လျှင် ထိုလေယာကို Clt+U အသုံးပြုပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Here to download Step by Step creation (500x3837)
Posted by NLS at 6/23/2007 04:13:00 PM0comments Links to this post
Me, Myanmar and Loud-Speaker
ကျွန်တှောသည် ဗုဒဿဓဘာသာကို နှလုံးသားထဲမှ နှစ်သက်သှောလည်း လှောစပီကာ ယဉ်ကျေးမှုကိုမှု လုံးဝလုံးဝ လက်ခံလို့ မရပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေခဲ့၍လည်း ဖြစ်မည်ဟု ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှာတုန်းက ညအိပ်ချိန်တွင် မည်သည့်အခန်းကမျှ အဝတ်လျှောစက်တောင် အသုံးမပြုကြပါ။ လူအားလုံးသည် တစ်နေ့တာ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ကြရသောကြောင့် အနားယူချိန်တွင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အနားယူလိုကြသည်။ ဆူညံသံ လုပ်သူရှိခဲ့လျှင် ရဲစခန်းကို တိုင်ကြား၍ရသည်။ ထိုသို့သော အကျင့်များဖြင့် ထုံမွှန်းခဲ့ဘူးသော ကျွန်တှောသည် မြန်မာပြည် ပြန်လာသောအခါ လှောစပီကာနှင့် တိုးပါတော့သည်။
ပထမဆုံး ကြုံရတာက နှစ်အိမ်ကျှောမှ နတ်ပွဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တှော အလုပ်လုပ်သည်မှာ ညပိုင်းဖြစ်သည်။ အိပ်ချိန်မှာ မနက်လေးနာရီမှ ၁ဝနာရီအတွင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နတ်ပွဲကား ၅ရက်တိတိ နံနက် ၆နာရီမှ စကပါသည်။ ဆိုင်းဝိုင်းအပြည့်နှင့် ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးနေ့က ၅နာရီထိုးလောက်မှ အိပ်ရာဝင်ခဲ့သော ကျွန်တှောသည် ၆နာရီထိုးတွင် ရုတ်တရက် ဆိုင်းသံဗုံသံများ ကြားလိုက်ရသောအခါ အလွန်တရာ ထိတ်လန့်ကာ အိပ်ရာမှ နိုးသွားသည်။ ထို့နောက် နတ်ပွဲမှန်းသိ၍ ဆက်အိပ်ရန် ကြိုးစားရာ မည်သို့မျှ မရတော့ပါ။ ထိုသို့ဖြင့် ၅ရက်တိတိ နတ်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရသောကြောင့် ကျွန်တှောသည် တစ်နေ့တစ်နေ့ ထိုနတ်များကို ထိုင်၍သာ ဆဲနေမိ ပါတော့သည်။
ဒုတိယမှာ အသံမစဲ မဟာကဋဿဌာန်းပွဲ ဖြစ်ပါ၏။ ဘုရားရှင်သည် ပဋဿဌာန်းတရားတှောကို ဆင်ခြင်တှောမူသော အခါမှ ရောင်ခြည်တှောသည် စကြဝဠာသို့တိုင်အောင် ပြန့်ထွက်လာခဲ့ကြောင်း ကျွန်တှော မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တှော့အခန်းမှာ ထိုပဋဿဌာန်းရွတ်ဖတ်ရာ နေရာနှင့် သိပ်မဝေးလှပါ။ တရားကျင့်လိုသောသူသည် တရားရှိရာသို့ သွားရမည်။ စာသင်လိုသူသည် စာသင်ခန်းသို့ သွားရမည်။ ကားစီးလိုသူသည် ကားဂိတ်သို့ သွားရမည်။ လောလောဆယ်တွင် ကျွန်တှော့မှာ တရားနာရန် ဆနဿဒ မရှိပါ။ ကျွန်တှော နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်လိုလှပါသည်။ သို့သှော ထိုအသံသည် ကျွန်တှော့နားထဲသို့ ကျွန်တှော လက်မခံချင်ဘဲ အတင်းဝင်နေသည်။ ကျွန်တှော ကဲ့သို့ပင် အနားယူချင်သူများလည်း ရှိနေပေဦးမည်။ တရားတှောကို အဘယ်ကြောင့် အသံချဲ့စက် လှောစပီကာတို့ဖြင့် ရွတ်ဖတ်ရပါသနည်း။ ကြားနာမိလို့ ဒီတရားအပှေါမှာ သက်ဝင်မှု ဖြစ်လာလျှင် အကျိုးကုသိုလ် ရနိုင်ကြောင်း၊ နတ်ကောင်းနတ်မြတ် များကလည်း နှစ်ခြိုက်ကြောင်း ကျွန်တှောသိပါသည်။ သို့သှော ကျွန်တှော တရားမနာလိုသေးပါ။ ကျွန်တှော မနာလိုသေးသော တရားကို ကျွန်တှော့အား အတင်းဖွင့်ပြနေခြင်းမှာ ကျွန်တှော၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်မိသည်။ တစ်ခါက ကျွန်တှော တိဘက် လာမားကြီးများ၏ တရားဌာနကို ရောက်သွားသည်။ သူတို့လည်း တရားတွေ ရွတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် တောထဲတောင်ထဲ ကိုယ့်ကျောင်းအတွင်းမှာသာ ရွတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြည်နူးဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှောသည် အများအမြင်တွင် တိတဿထိ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သှော အေးချမ်းသော တရားဓမဿမအသံကို ကြည်နူးစွာ ခံစားရမည့်အစား လှောစပီကာ တရားသံကို နေ့ညမပြတ် ခံစားရသောအခါ ကျွန်တှော့စိတ်သည် ဒေါသမောဟ မာန်မာနများသာ ပို၍ပို၍ တိုးလာတော့သည်။ တစ်နေ့နေ့တွင်တော့ ထိုလှောစပီကာ အသံမစဲအစား တိုးတိတ်ငြင်သာစွာ ရွတ်ဖတ်နေသော ပဋဿဌာန်းတရားတှောမြတ်ကို ကြည်နူးစွာ နာကြားခွင့် ရပါစေဟု ဆုတောင်းနေမိ ပါတော့သည်။
တတိယအသံမှာ အလှူခံမဏဿဍာပ်မှ ဖြစ်သည်။ ဖြတ်သွားသမျှ ကားတိုင်းကို အလှူခံသည်။ လှူသောအခါ ဆုတွေပေးမည်။ သူများဆိုင်က အလှူခံဌာနအတွက် မုန့်တွေလာလှူသောအခါ ထိုဆိုင်ကို ချီးမွန်းခန်း ဖွင့်ခြင်းများလည်း ပါသည်။ ဇာတ်နိပါတ်တှောတွေကိုလည်း ဆွဲကာငင်ကာ ဟောပြောနေသေးသည်။ ကျွန်တှောသည် အှောကာအှောကာ ငိုပစ်ချင်တော့သည်။
အဖ်အမ်အိုင် ဥယျာဉ်ထဲက သစ်ခွဥယျာဉ်ထဲတွင်သာဆိုလျှင် ဒါမျိုးတွေ ကြုံရမှာ မဟုတ်ဟု တွေးမိသည်။ ထိုနေရာတွင်သာ အိမ်လေး တစ်လုံးလောက် ရှိလိုက်လျှင် ကျွန်တှော့မှာလည်း အလကားနေရင်း အကုသိုလ်တွေ တိုးလာမည် မဟုတ်တော့။ သို့သှော ထိုအိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ ငွေအင်အားဆိုတာ အိပ်မက်မှာပင် မရှိ။ ထို့ကြောင့် လူသည် ပိုက်ဆံမရှိသောအခါ အကုသိုလ်တရား ပိုပို တိုးပွားလာလေသလားဟုပင် သံသယ ဖြစ်လာပါတော့သည်။ လှောစပီကာသံများ ဆိတ်သုဉ်းပါစေ။
Posted by NLS at 6/23/2007 04:10:00 PM0comments Links to this post
Labels: Essay, Idea, Myanmar
Me, Myanmar and Monks
ရှေးမင်းများခေတ်ကာလက သာသနာတှောကို ကြည့်ရှုရန် မဟာဒါန်ဝန်ဆိုသည့် ရာထူးကို ခန့်ထားကြသည်။ သာသနာတှော သန့်ရှင်းရေး၊ ရဟန်းသံဃာတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည့် ကိစဿစများတွင် မဟာဒါန်ဝန်က ဖြေရှင်းရသည်။ ဘုန်းကြီး ဝတ်ကြသည်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ကလည်း တကယ့်ကို သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်လိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း နောင်ဘဝအတွက်၊ တချို့ကလည်း စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းသည့်အတွက်၊ အချို့ကလည်း အခက်အခဲ မျိုးစုံတို့ကြောင့်၊ အချို့ကလည်း တရားဓမဿမ ကျင့်ကြံလိုသောကြောင့်၊ တရားထူး သိမြင်လိုသောကြောင့် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သှော မြင့်မြတ်သော သကဿငန်းကို ဝတ်ရုံလိုက်ပြီ ဆိုသည်နှင့် မြင့်မြတ်သော အကျင့်ကိုသာ ကျင့်ကြံသင့်ပေသည်။
၂၀၀၂ ကာလများဆီက ဖြစ်သည်။ သန်လျင်တံတားကြီးနားမှ ယုဇနဥယျာဉ်သို့အသွား ဘုန်းကြီးများကို စက်ဘီးများဖြင့် အစုလိုက် အပြုံလိုက် တွေ့လိုက်ရသည်။ လူများလည်း မနည်းပေ။ စိတ်ဝင်စား မိသောကြောင့် သူတို့သွားရာသို့ လိုက်ကြည့်မိသောအခါ ဟိုဘက်ဒီဘက် နှစ်ဘက်ခွဲ၍ ဘောလုံးကန်နေ ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူများက အပြင်မှ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ အားပေးလျက်။ တစ်ဖက် ဘုန်းကြီး အသင်းက အပှေါရုံ သကဿငန်းမပါ၊ သင်းပိုင်နှင့်သာ ဖြစ်သည်။ နောက်ဘုန်းကြီး အသင်းက သကဿငန်းကို တစောင်း ရုံထားသည်။ ကျွန်တှောသည် လွန်စွာမှ ရှက်ရွံ့ စိတ်ပျက်ခြင်းများစွာ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
ရပ်ကွက်များတွင်လည်း ဘုန်းကြီး အချို့ ဆိုက်ကားပှေါတွင် လှောစပီကာတင်ပြီး ကျောင်းဆောက်ရန်၊ ဘာဆောက်ရန်ဖြင့် အလှူ လိုက်ခံကြသည်။ တိုက်ခန်းများပှေါအထိ တက်ပြီး ဆွမ်းအလှူ ခံကြသည်။ ခရီးစရိတ် ပြတ်သွားလို့ဆိုပြီး လိုက်တောင်းသူများလည်း ရှိသည်။
တစ်လောက နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်နှင့် ဘုရားပှေါတွင် စကားပြောနေခိုက် ဦးဇင်းတစ်ပါးက ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် လက်တွဲပြီး ဖြတ်သွားသည်။ ကျွန်တှောသည် သိန်းဖေမြင့်၏ တက်ဘုန်းကြီး ဝတဿထုကို ပြေးသတိရလိုက်မိသည်။ နိုင်ငံခြားသားကမေးသည်။ မင်းတို့ဆီက ဗုဒဿဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေလည်း မိန်းမနဲ့ မကင်းဘူးလား ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှောလည်း တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ထေရဝါဒတွင် ဒါမျိုး လက်မခံကြောင်း၊ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးများမှာ အတုအယောင် သာသနာဖျက်များသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက်မကြာပါ ကားနှင့်ပြန်လာရာ မီးပွိုင့်တစ်ခုတွင် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကားမောင်းပြီး ဒကာလုပ်သူက ဘေးမှ ထိုင်စီးသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသေးသည်။
ဘုန်းကြီးများ နိုင်ငံရေးစကား ပြောကြသည်။ လူမျိုးရေး တိုက်ပွဲတွေ နွှဲကြသည်။ ဆရာဝန်အလုပ် ဆရာဝန်လုပ်၊ ကားသမား ကားအလုပ်လုပ်၊ ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီးလုပ်မှ ဘုန်းကြီးဟု ခှေါဆိုခြင်းငှာ ထိုက်သည်ဟု ကျွန်တှော ထင်မိသည်။ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးတွင် ခေတ်မီသော ဦးဇင်းပျိုများ အင်တာနက်ထဲ ဝင်လာကြသည်။ ပွန်းဆိုဒ်များ မကြည့်ဘူးဟု ဆိုသှောလည်း အချို့က ချတ်ရွမ်းများတက်ကာ ပေါက်ကရများ ပြောကြသည်။ ဘာသာရေးစကားများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြောကာ လက်တွေ့တွင် မိန်းခလေးများကို ထိကပါး ရိကပါး ပြောတတ်သော ဦးဇင်းများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ အချို့ဆိုလျှင် ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် အောက်ပိုင်းကိစဿစများကို ဘုရားဟောဆိုပြီး ပြောတတ်ကြသေးသည်။ နောက်ဆုံး ထိုဦးဇင်းများကို ဘန်းပစ်ရသည်။
ဆရာတှောကြီးများတောင် လန်ခရုဆာ စီးနေသော ကလိယုဂ်တွင် ဦးဇင်းများ ခေတ်နှင့်အညီ အင်တာနက် သုံးခြင်းကို ကျွန်တှော လက်ခံပါသည်။ အင်တာနက်တွင် ဗဟုသုတများစွာ ရှိသည်။ အတတ်ပညာ များစွာရှိသည်။ အချို့သော ဦးဇင်းများ ကွန်ပျူတာကို မွှတ်နေအောင် ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ အချို့လည်း ပရိုဂရမ်းမင်း၊ ဒီဇိုင်း ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ဘုရားရှင်၏ သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမဿမာတို့ကို လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ရေးကြသည်။ ထိုဆရာတှောများကို ကျွန်တှောလေးစား မိပါသည်။ သို့သှောလည်း ထိုထိုသော လူကျှောများ ကြားထဲမှ သကဿငန်းဝတ်ပြီး ပေါက်တက်ကရ လုပ်နေသော ကိုယ်တှောများကိုတော့ မနှစ်သက်မိတာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ တရားတှောများသည် မွန်မြတ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ သာသနာတှောတွင် သကဿငန်းရုံပြီး ဘုရားရှင်၏ သာသနာကို နိမ့်ကျ၊ အမြင်တိမ်းစောင်းစေသည့် အမူအကျင့်များ မလုပ်သင့်ဟု ထင်မိသည်။ ဗုဒဿဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုသို့သော သံဃာပျက်များ ပေါများလာလျှင် သာသနာလည်း ပျက်လာမည်မှာ မလွဲချေ။
မင်းတကာတို့ အလေးထား ရိုကျိုးနေသောအချိန် ခမည်းတှော ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့် တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ကြွရာတွင် မည်သည့် ယာဉ်ရထား တန်ခိုးဣဒဿဓိပါဒ်မှ မသုံးဘဲ တစ်နေ့လျှင် တစ်ယူဇနာနှင့် ယူဇနာခြောက်ဆယ်ကို ခြေလျှင် ကြွတှောမူသော ဗုဒဿဓဘုရားရှင်နှင့် သာဝကများကို ကျွန်တှောသည် လွန်စွာမှပင် ကြည်ညိုနေမိပါတော့သည်။
Posted by NLS at 6/23/2007 04:07:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Myanmar, Religion, Thought
Me, Myanmar and Beggars
မြန်မာပြည်တွင် တနေ့တခြား သူတောင်းစားများ များပြားလာသည်။ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် ကားနားကို အတင်းကပ်ကာ အတင်းတောင်းသည်။ လက်ဘက်ရည် ဆိုင်များတွင် ထိုင်ရှိခိုးနေသူများ အများအပြား။ ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးလေးတွေ အများစု ဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း ခြေထောက်လေး တစ်ဖက် ပြတ်တာလောက်နှင့် တောင်းနေကြသည်။ အချို့ကလည်း မိမိကလေး အခါလည်လေးကို နေပူထဲပိုက်ပြီး လိုက်တောင်းကြသည်။ အောက်ခြေလူတန်းစားများ စီးပွားရေး အရမ်းကြပ်တည်း နေကြသည်ကို ကျွန်တှော နားလည်ပါသည်။ သို့သှော ဒီအရာကို ဒီအတိုင်း ဆက်ကြည့်နေလျှင် အချောင်စိတ်ဓါတ် မွေးမြူသူများ ပေါများလာတော့မည်။ စကဿငာပူတွင် တောင်းရမ်းကြသူတိုင်း အတတ်ပညာ တစ်ခုခု တတ်ကြရသည်။ သူတို့၏ အတတ်ပညာကို ပြကာ ဖျှောဖြေ၍ နှစ်သက်သူများက သဘောကျကြေး ပေးသွားသည့် ပုံစံမျိုး။ တောင်းရမ်းသူ မဟုတ်။ ပြီးတော့ တကယ့်ကို မျက်စိမမြင်သူ၊ ဒုကဿခိတလုံးလုံး ဖြစ်နေသူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ဒီမှာ ကျွန်တှော တွေ့ရသော သူတောင်းစားများကတော့ တချို့ဆို ကျွန်တှော့ အသက်အရွယ်ပင် ရှိသေးသည်။ ကျန်းကျန်းမာမာ သန်သန်စွမ်းစွမ်းများ ဖြစ်သည်။ တချို့ကလည်း ခြေထောက်၊ လက် ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ပတ်တီးတွေ စည်းထားကြသည်။ ခရီးဝေးသွားလျှင် ကလေးတွေက ဟိုင်းဝေးလမ်းပှေါတက်ပြီး ရှိခိုးနေကြသည်။ သကဿငန်းကြီး နှင့် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ကာ တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက် လိုက်အလှူခံသည်။ ဆိုက်ကားကြီးစီးပြီး လိုက်အလှူခံသည်။ နိုင်ငံခြားသားမြင်လျှင် နောက်မှ တကောက်ကောက် လျှောက်လိုက်ပြီး မပေးမချင်း တောင်းသည်။ သနားသော သူများက လှူဒါန်းကြသည်။ ကျွန်တှောသည် သူတစ်ပါး အလှူကို မစဿဆိယစိတ် မဖြစ်ပါ။ သို့သှော မုဒိတာလည်း မပွားနိုင်ပါ။ မြန်မာတို့သည် သနားဂရုဏာစိတ် ထားတတ်သော သူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုစိတ်သည် ကောင်းပါ၏။ သို့သှော ထိုစိတ်မျိုး ထိုထိုသော နေရာမျိုးတွင် မထားသင့်ဟု ထင်မိသည်။ ပိုက်ဆံကို ဒီလိုတောင်းလို့ ရကောင်းမှန်းသိလျှင် ထိုကလေးများသည် ဘာမှအသုံးကျမည် မဟုတ်တော့။ အခြားနိုင်ငံသားများ အမြင်တွင်လည်း အထင်သေးဖွယ် ဖြစ်သည်။ ထိုဓလေ့ကြီးကို တိုက်ဖျက်သင့်သည်။ အခြေခံ လူတန်းစားများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရအောင် စားဝတ်နေရေး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးရမည်။ ထိုမှတဆင့် တောင်းစားလိုလျှင် ကိုယ်ကာယ ချွတ်ယွင်းနေကြောင်း ထောက်ခံစာနှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။ အလကား တောင်းမစားစေဘဲ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို သင်ကြားတတ်မြောက် စေရမည်။ အသိပညာ ပေးရမည်။ အသိပညာလည်းမရှိ၊ စားစရာလည်း မရှိလျှင် နောက်ဆုံး ခိုးဆိုးလုယက် ကြတော့မည်။ ကျွန်တှောတို့ နိုင်ငံကြီးမှာ သူတောင်းစား များနေပြီဆိုသော အသံမှာ နားထောင်၍ ကောင်းသော အသံဟု ကျွန်တှော လုံးဝ မယုံကြည်မိပါ။
Posted by NLS at 6/23/2007 03:57:00 PM0comments Links to this post
Labels: Essay, Idea
Myanmar's Historical Map
ပထမကြိမ်၊ ဇူလိုင် ၂၀၀၄
စာမူခွင့်ပြု ၅/၂၀၀၄ (၁)
ကျောက်ခေတ်မှစသော မြန်မာ့သမိုင်းကို ယခင်က ပုံပြင်များ ဒဏဿဍာရီများဖြင့်သာ သိခဲ့ရသည်။ ရှေးမြန်မာများ ဝင်ရောက်နေထိုင်ပုံကို သမိုင်းဆရာ အချင်းချင်းလည်း အငြင်းပွားနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ဆိုသူများ ရှိသလို မြန်မာအစ တကောင်းက ဆိုသူများလည်း ရှိသည်။ ပုံတောင်ပုံညာတွင် ရှေးဦးလူ၏ ပရိုင်းမိတ်ကို တွေ့သောအခါ မြန်မာအစ ပုံတောင်ပုံညာကဟူသော စကားလည်း ပှေါလာပြန်သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က တတိယတန်း ကျောင်းသုံး မြန်မာ့သမိုင်း ပုံပြင်များဆိုသော စာအုပ်တစ်အုပ် ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုစာအုပ်လေးမှာ အလွန်ကောင်းသည်။ မူလတန်းအတွက် ရည်ရွယ်သှောလည်း ယနေ့အချိန်အထိ ဖတ်၍ မရိုးနိုင်သေးပေ။ ရှေးဟောင်းလူတို့ မြှားဆိပ်ရှာပုံ၊ မီးကိုတွေ့ရှိပုံ၊ ဗိသဿသနိုးမြို့နှင့် ရန်ပယ်ချောင်းအကြောင်း၊ ရှေးဟောင်းလူနှင့်ဝက်သား စသည်ဖြင့် ပုံပြင်လေးများပုံစံ ရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဗိသဿသနိုးမြို့နှင့် ရန်ပယ်ချောင်း အကြောင်းတွင် ဒဏဿဍာရီကဆိုသလို နတ်စည်ကြီးတီးရုံနှင့် ချောင်းရေလျှံသွားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိအောင် ယုတဿတိတန်တန် ရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် သမိုင်းစာအုပ်သည် သမိုင်းစာအုပ်နှင့် တူသည်ဟု ပြော၍ရသည်။
ယခုစာအုပ်တွင် ဆရာကြီးသည် မြန်မာ့သမိုင်းကို ရုပ်ပုံသက်သေ အထောက်အထား မျိုးစုံသုံးပြီး တင်ပြထားသည်။ ပုံပြမြန်မာ့သမိုင်း ပုံစံမျိုး ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သမိုင်း မဟုတ်သှောလည်း ပုံပြသမိုင်း စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဦးနု၏ ရုပ်စုံအခြေခံသမိုင်း စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ်သည် ပထမတွဲသာ ထွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ စာအုပ်သည် ဒုတိယပှေါလာသော စာအုပ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဦးနု စာအုပ်မှာ ကမဿဘာနှင့်ချီပြီး ရေးထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ယခုစာအုပ်ကတော့ မြန်မာ့သမိုင်း သီးသန့်ကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။
စာအုပ်ရဲ့ နိဒါန်းမှာ ဆရာကြီးက ဒီလို ရေးထားပါသည်။
မြန်မာ့သမိုင်းကို သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား မှတ်သားပြောခဲ့တာကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် အကဿခရာတင်တာ မကြာသေးဘူး။ အဲဒီအခါမှာ သဘာဝယုတဿတိမတန်တာတွေ၊ ပုံပြင်သက်သက် ပြောတာတွေ ဖြုတ်ပစ်သင့်ပေမယ့် မဖြုတ်ဘူး။ ဖြည့်သင့်တာလည်း မဖြည့်ဘူး။ ပုံပြင်နဲ့သမိုင်း ခွဲမရအောင် တွဲနေတယ်လို့ပဲ ထားလိုက်ကြတယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဆရာနဲ့ တပည့်ပါ အဖြစ်အပျက်အမှန်နဲ့ ပုံပြင်ကို မခွဲတတ်ကြဘူး။ ရှေးအဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြနိုင်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို မြေထဲက တူးဖှောရရှိနိုင်တယ်။ ကျောက်စာ မှောကွန်းတွေကို ဖတ်ပြီး ဆက်စပ်လိုက်ရင် သမိုင်းဖြစ်မယ်။ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး ဆက်စပ်ပြီး ဝေဖန်ရေးသားမယ် ဆိုရင် မြန်မာ့သမိုင်း အစစ်အမှန်ကို ရမယ်။ ယခုစာအုပ်မှာပါတဲ့ အကြောင်းတွေဟာ ရှေးရာဇဝင်ကျှော၊ ရာဇဝင်ကြီး၊ မှန်နန်း စတာတွေမှာ ပါတာတွေနဲ့ လုံးဝမပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ငါ့မြေး ငါ့သားအရွယ် ကျောင်းသားငယ်တွေ ဖတ်ကြည့်ပြီး အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်
11. သမိုင်းခေတ်ကို မရောက်မီ ကြားကာလ
18. မြန်မာတွေ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်ပုံ
19. မြန်မာတို့ ဗဟိုနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း
စသည်ဖြင့် အပိုင်းတွေခွဲပြီး ရှင်းပြထားသည်။ ခေါင်းစဉ်တိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပုံတွေ အမြောက်အများဖြင့် ရှင်းလင်းထားတာလည်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်ကဟူသော အယူအဆနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပညာရှင်များ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားကြသည်ကို မှတ်သားဖူးသည်။ ဆရာကြီးက တကောင်းကဟူသော အယူအဆထက် ကျောက်ဆည်ကဟူသော အယူအဆကို ပိုနှစ်သက် လက်ခံသည်ဟု ကျွန်တှော ထင်မိသည်။ ထိုသို့ ထင်ရာမှာလည်း သမိုင်း သက်သေ အထောက်အထား များစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တကောင်းတွင် ရှေးဟောင်းပစဿစည်းများစွာ တွေ့သည်ဆိုသှောလည်း တကောင်းသည် မြန်မာတို့၏ အစဟု ဆရာကြီး မယူဆချေ။ တကောင်းတွင် ပျူလူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့သှောလည်း မြန်မာအမျိုးသည် ပျူလူမျိုး သက်သက် မဟုတ်ချေ။ မူလမြန်မာများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၄၀၀၀ လောက်ကစပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက် ကန်စူဒေသ၊ ထောင်မြစ်ဝှမ်းမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆရာကြီးက ယူဆကြောင်း တွေ့ရသည်။
ကျွန်တှော့အနေဖြင့်မူ ဒဏဿဍာရီစကား၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများအရ ဖြစ်လာသော သမိုင်းထက် လက်တွေ့ကျသော သမိုင်းကို ပိုမြတ်နိုးသည်။ ဆရာကြီး၏ စာအုပ်တိုင်းသည် အဖိုးတန်သည်။ ဗဟုသုများဖြင့် ပြည့်နေသည်။ သူ့ဘဝ တလျောက်လုံးတွင် သမိုင်း သုတေသနကိုသာ ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်သွားခဲ့ပြီး စစ်မှန်သော သမိုင်းကို ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တှောတို့ခေတ်တွင် ဆရာကြီးကို အနည်းအကျဉ်း မှီလိုက်ရပြီး ဆရာကြီး၏ စာအုပ်များ မှတ်တမ်းများ ဖတ်ရှုခွင့် ရခြင်းမှာ အလွန် ကုသိုလ်ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုချင်သည်။ ဆရာကြီးကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းသည် ပြန်လည် ခေါင်းမော့လာသည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးက သူတွေ့ရှိသော အရာကို မှန်သည်ဟု ယတိပြတ်မဆို။ သမိုင်းဟူသည် အသစ်တွေ့ရှိချက်များကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အသစ်မတွေ့ရှိခင် တွေ့ရှိပြီးဖြစ်သော အရာများအပှေါတွင် သုံးသပ်ပြီး လက်ခံရမည်ဟု မှတ်သားဖူးသည်။
ယခုစာအုပ်တွင် ရှေးမြန်မာ့သမိုင်း စာအုပ်များမှ တမူကွဲထွက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော မြန်မာ့သမိုင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သမိုင်းနှင့် ဆိုင်သော ရုပ်ပုံများစွာ ပါဝင်သောကြောင့်လည်း ဗဟုသုတ ရရှိသည်။ လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆရာကြီး ဆိုသှောလည်း ထိုစာအုပ်မှာ ပေါ့သွားခြင်းမရှိ လေးလေးနက်နက် တိတိကျကျ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာမျက်နှာအားဖြင့် ၁ဂဝခန့်ရှိပြီး စာရွက်သားကတော့ မကောင်းလှချေ။ သို့သှောလည်း စာအုပ်စင်တွင် မြတ်နိုးစွာ တင်ထားရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ဦးမောင်မောင်တင် ကုန်းဘောင်ဆက်ရာဇဝင်တှောကြီး ၃တွဲ
ဦးနု ရုပ်စုံအခြေခံသမိုင်း ပတွဲ
ဗိုလ်မှူးဘရှင် ရှေးဦးမြန်မာတို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတည်ဟန်
Report on the Excavation of Beikthano U Aung Thaw
Posted by NLS at 6/21/2007 03:29:00 PM0comments Links to this post
Labels: Book, Book Review
မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်၊ ၂၀၀၅
၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ မှတ်မှတ်ယယ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်း မှာတောင် တင်တာ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ဟာ အဖွင့်စကားကစပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်ပါတယ်။ မြေပုံများ ဆိုတဲ့အတိုင်း မြန်မာ့သမိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မြေပုံတွေချည်း ပုံခြောက်ဆယ် ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့ ပုံတွေက တကဿကသိုလ်ပညာ ပဒေသာမှာ ဦးသိန်းရေးတဲ့ စာတမ်းတွေက မြေပုံတွေကို တဆင့်ကူးယူပြီး ဒီစာအုပ်မှာ အသုံးပြုတယ်လို့ ဆရာကြီး ရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။
4. ပါမီယန်ယုဂ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ
5. ဂျူရာဆစ်ယုဂ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ
6. မိုင်အိုဆင်း အဏုယုဂ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ
7. ပလိုင်အိုဆင်း အဏုယုဂ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ
11. အနဝတဿတအိုင်မှ စီးထွက်လာသည့် မြစ်ကြီးလေးစင်း
13. ဗုဒဿဓနှစ် ၂ဝဝကျှောမှ ၂ဝဝဝအတွင်း သာသနာပျံ့နှံ့ တည်ခဲ့ဖူးရာ ဗုဒဿဓသာသနိကမြေပုံ
16. ပလောင်၊ ရိအန်၊ လဝ၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းတရုတ်တို့၏ မူလဒေသများ
20. မြန်မာအစ ခေတ်ဟောင်းမြေပုံ
21. ခရစ်နှစ် ကိုးရာစု၊ မြန်မာတို့၏ မူလအခြေစိုက် ဒေသများ
22. မြေပုံဘုရား တွေ့ရှိရာအရပ်
23. ပုဂံနယ်တဝိုက် ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးများမြေပုံ
24. မင်းနန်သူရှိ အေဒီ၁၂၃၃တည် အနနဿတသူကျောင်းတိုက်ပုံစံ
27. ကျိုင်းတုံ ၃၂မြို့
28. မဒမ ၃၂မြို့
31. ၁၁၀၃-၀၄ အင်းဝ ဟံသာဝတီ စစ်ပွဲပြပုံကြမ်း
32. ရာဇာဓိရာဇ်၏ စစ်ရေး ၁၃၆၄-၁၄၀၆
33. ရာဇာဓိရာဇ်၏ စစ်ရေး ၁၄၀၇-၁၄၂၁
34. တပင်ရွှေထီးစစ်ရေး ၁၅၃၁-၁၅၅၀
36. ဟံသာဝတီဆင်ဖြူရှင်စစ်ရေး ၁၅၅၀-၁၅၈၀
37. ဟံသာဝတီဆင်ဖြူရှင် နိုင်ငံ၊ တိုင်း၊ ပြည်၊ မြို့၊ ရွာများ
38. ညောင်ရမ်းမင်း၏စစ်ရေး ၁၅၆၇-၁၆၀၆
39. အနောက်ဘက်လွန်မင်း၏ စစ်ရေး ၁၆၀၇-၁၆၂၃
41. ပင်းတလဲမင်း- တရုတ်အရေးတှောပုံ ၁၆၄၉-၁၆၆၁
43. စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ၁ရရာစုမှစပြီး စစ်သုံ့ပန်းများ ချထားပုံ
44. ကသည်းရန်ကြောင့် ခံတပ်တည်ရသည့် မြို့များ
46. အလောင်းမင်းတရားမပှေါမီ အင်းဝနှင့် ဝန်းကျင်ဒေသများ
47. အလောင်းမင်းတရားစစ်ရေး ၁၇၅၂-၅၄
48. အလောင်းမင်းတရားစစ်ရေး ၁၇၅၄-၅၇
49. အလောင်းမင်းတရားစစ်ရေး ၁၇၅၇-၆၀
50. အယုဒဿဓယကို အလောင်းမင်းတရား ဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခြင်း
51. မြေဒူးမင်း၏ ထိုင်း၊ ကသည်း၊ တရုတ်စစ်ရေး
52. မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁ဂရာစုနှောင်းကာလတိုင်းများ
54. အဂဿငလိပ်မြန်မာ ပထမစစ်
55. သာယာဝတီမင်း ပုန်ကန်မှု အရေးအခင်း
57. မနဿတလေးမှသွယ်တန်းသော ဗန်းမှော၊ မိုးနဲ၊ မြေထဲရောက် ကြေးနန်းလမ်းများ
58. မြန်မာအဂဿငလိပ် ဒုတိယနှင့် တတိယစစ်ပွဲ
59. သီပေါမင်းလက်ထက် နိုင်ငံအရှေ့မြောက် စစ်ရေး
ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်ဟာ အရင်ဆုံးပှေါတယ်။ နောက်တော့ တနသဿငာရီ ကမ်းရိုးတန်း ပှေါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သန်းပေါင်း ၂ဝကျှောက ရွှေဘို၊ ကသာ စတဲ့ဒေသတွေဟာ မြစ်ဝကျွန်းပှေါ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲဒီနောက် အရင်နှစ် ငါးသန်းလောက်က စပြီးမှ ဟသဿငာ မြစ်ဝကျွန်းပှေါ ဒေသဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ရာဇဝင် စာအုပ်တွေမှာ ဘုရင်တွေ စစ်ဆင်တာ ဖတ်ရပေမယ့် မျက်စိထဲ ရှင်းရှင်း မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ဖတ်တော့မှ သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာသဘောတရား စစ်ဆင်မှုတွေကို နားလည်လာတော့တယ်။
ဒီစာအုပ်မျိုးဟာ အလွန်ရှားပါတယ်။ တွေ့ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ စာအုပ်ဟာ စာမူခွင့်ပြုချက် မပါပါဘူး။ Legal အရွယ်အစားနဲ့ စာမျက်နှာ ၁၂ဝလောက် ရှိပါတယ်။ အချို့ပုံတွေကလည်း စိတ်မှန်းနဲ့ ဆွဲထားတာမျိုးပါ။ ဥပမာ အနဝတဿတအိုင်မှ စီးထွက်လာသည့် မြစ်ကြီးလေးစင်း ဆိုတဲ့ ပုံမျိုးပါ။ ပုံတှောတှောများများကတော့ သမိုင်းသုတေသန၊ ဘူမိဗေဒ အထောက်အထားတွေကို ကိုးကားပြီး ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေပါ။ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းအတွက် ဒီစာအုပ်ဟာ အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖှောပြခဲ့တဲ့ မြေပုံခေါင်းစဉ်တွေကို ကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်။ ၄၀၀၀ ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကတော့ များတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီဘာသာရပ်ကို ဝါသနာ ပါသူတွေကတော့ စာအုပ်မြင်တာနဲ့ လုံးမမတုံ့မဆိုင်းဘဲ ဝယ်ဖြစ်သွားမယ့် စာအုပ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
Posted by NLS at 6/21/2007 03:19:00 PM0comments Links to this post
Research of Myanmar Tradations
ဒီစာအုပ်ဟာ သမိုင်းသုတေသီတိုင်း၊ သမိုင်းကို ဝါသနာပါသူတိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးသူတိုင်း ဝယ်ယူသိမ်းဆည်း လေ့လာကြရမယ့် စာအုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ သတင်းစာ၊ မဂဿဂဇင်းအစောင်စောင်မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း ၄၆ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။
5. မြန်မာ့စစ်တုရင် မြန်မာစစ်ဆင်မှု
17. မြန်မာ့အသည်းနှလုံးကို ထိန်းသိမ်းရေး
28. အနှစ်၎ဝဝပြည့် အင်းဝ
32. ရွှေကျင်ကျောင်းတှောကြီး၏ ဗိသုကာ
33. ဗားကရာကျောင်းတှောကြီး၏ ဗိသုကာမှတ်တမ်း
34. ကျိုကဿကလွန်ဗွန်းစေတီတှော ငှက်မြတ်နားတှော
35. ဖွားတှောမူခန်း မှားတှောမူခန်း
38. တကောင်းက အုတ်ခွက်ဘုရားများ
40. မဟာမုနိဘုရားကြီးအတွင်း အုတ်ဂူတှော
42. ဗြုဗဿဗာသန် ဥတဿတရာသန်
44. အနဿဒဂူမှ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့
45. ဗုဒဿဓ၏ ခြေရာတှောများ
46. သယဗဿဘူ ဌာပနာတှောများ
ဦးဝင်းမောင်ဟာ ရှေးဟောင်းသုတေသနကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ပြီး အဲဒီနယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူမို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတွေဟာ အများအားဖြင့် မဂဿဂဇင်း၊ သတင်းစာ အသီးသီးမှာ ဖှောပြပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို တစုတဝေးတည်း စုဆောင်းထားတာမျိုးက ရှားပါတယ်။ ဆောင်းပါးတိုင်းလိုလိုမှာ သက်ဆိုင်ရာ သရုပ်ဖှောပုံတွေ တွဲပါတာကြောင့်လည်း မျက်စိထဲ တန်းမြင်ပြီး လေ့လာရ လွယ်ကူပါတယ်။
ဒီလိုစာအုပ်မျိုး လေ့လာတဲ့အခါ ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်။ အချို့က ရှေးဟောင်း အလေးတွေ၊ ဒဂဿငါးတွေ စတဲ့ ရှေးဟောင်းပစဿစည်း စုဆောင်းကြတာ ဝါသနာပါတယ်။ ပစဿစည်းတိုင်းက အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးဟောင်းပစဿစည်းဆိုရင် ဈေးကောင်းရလို့ အတုလုပ်ထားတာတွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ ပစဿစည်းတိုင်းမှာ ကွဲပြားတဲ့ ခေတ်ကာလ နောက်ခံတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို သေချာလေ့လာမှ သိရတာပါ။ ဟသဿငာအလေးမှ ရှေးဟောင်းအလေး မဟုတ်ပါဘူး။ တိုးအလေး၊ ကရဝိတ်အလေး၊ ဆင်အလေး စသည်ဖြင့် ရှိပါသေးတယ်။ သီရိဝစဿဆပါတိုင်း ပျူဒဂဿငါး မဟုတ်သလို မပါတိုင်းလည်း ပျူဒဂဿငါး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရမယ့် ဒဂဿငါးအကြောင်းတွေလည်း သိလာရပါတယ်။ ရုပ်ပုံတွေ ထုပုံ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း ခေတ်ကာလကို ခွဲခြားတတ်လာတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုစာအုပ်မျိုးဟာ အဖိုးတန်ပါတယ်။ ထွက်နေသမျှ စာအုပ်တွေဟာ အပျှောဖတ်တွေ များနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို စာအုပ်မျိုးကို အကျိုးမမျှောဘဲ ထုတ်တာကလည်း ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တန်ဖိုး ၂ဝဝဝကျပ်ဆိုတာ သာမန်အနေနဲ့ များတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အထဲကစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ဝယ်ရတာ တန်တယ်ဆိုတာကို သိသွားမှာပါ။ ကျွန်တှောကတော့ ဆရာ့ဆီကနေ ဒီလိုဆောင်းပါးတွေ စာအုပ်တွေ များများ ထွက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
Burmese Design Through Drawings U Aye Myint
Posted by NLS at 6/21/2007 03:07:00 PM0comments Links to this post
Buddha and Myanmar
ဦးလှသိန်းထွဋ်၏ ဗုဒဿဓနှင့် မြန်မာလူမျိုး ဟူသော စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်သည်။ အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ ဘုရားရှင်သည် အိနဿဒိယ ဒေသက ဖြစ်သှောလည်း ကုလားလူမျိုး မဟုတ်၊ မြန်မာအမျိုးသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တှော သိသလောက် နီပေါလူမျိုးများနှင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ရုပ်ရည်အားဖြင့် တူကြသည်။ ဘာသာစကား အားဖြင့်လည်း သိပ်မကွဲပါ။ စကားလုံး တှောတှောများများပင် ဆင်ဆင် တူကြသည်။ တူမည်ပေါ့ မွန်ဂိုလွိုက် မျိုးနွယ်စုကြီးမှ ဆင်းသက်သည်ချည်းကိုး။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက လူမျိုးနွယ်စုကြီး နှစ်ခု ရှိသည်။ တစ်ခုက မွန်ဂိုလွိုက်မျိုး၊ တစ်ခုက မွန်ခမာမျိုး ဖြစ်သည်။ မွန်ဂိုလွိုက် အမျိုးများသည် တိဘက်-မြန်မာစကား ပြောကြသူများ ဖြစ်သည်။ မွန်ခမာ အနွယ်ဝင် ယိုးဒယား၊ ရှမ်း၊ မွန်တို့သည်လည်း စကားဆင်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ အိနဿဒိယတွင် ယခင်က ဒြာဗီးဒီးယန်းများသာ နေထိုင်ကြသည်။ နောက်ပိုင်း အာရိယန်များ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံလိုက်ရသည်။ လူများစွာ သိကြသော ရာမမင်းသည် အာရိယန် ဖြစ်သည်။ ဒသဿသဂီရိသည် ဒြာဗီးဒီးယန်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင် လက်ထက်က အိနဿဒိယ၏ အင်အားကြီးမားသော တိုင်းကြီး ၁၆တိုင်းတွင် သာကီမင်းတို့၏ နယ်မြေများ မပါဝင်ခဲ့။ သာကီဝင်များ အမြစ်ပြတ် သုတ်သင် ခံရသောအခါ နေရာအနှံ့သို့ တိမ်းရှောင် ကြရသည်။ ထိုသို့ တိမ်းရှောင်ရင်းမှ ယင်းသာကီဝင် မင်းဆက်တစ်ပါးက မြန်မာပြည်တကောင်းတွင် အခြေချ နေထိုင်ရာမှ မြန်မာလူမျိုးများ စတင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အသစ်တွေ့ရှိချက်များအရ ပုံတောင်ပုံညာ ဒေသတွင် ရှေးဦးလူများ နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ထိုယောနယ်တဝိုက်ရှိ တောင်သားလူမျိုးများသည် ရှေးဦးမြန်မာ အဆက်အနွယ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာကြည့်သောအခါ တောင်သားစကားသည် အလွန်ရှေးကျသော မြန်မာစကား တစ်မျိုး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် မွန်ဒေသတွင်လည်း မွန်ခမာနွယ်များ ရောက်ရှိနေကြပြီး ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ပြောသည့် ပျူတွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်သလဲ ငါဒီမှာဟေ့လို့သာ အှောလိုက်ချင်သည် ဆိုသောစကားမှာ လွန်စွာမှ မှန်ကန်သော စကားဖြစ်သည်။ သွေးရောကုန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာကြီးများပုံကို ဓါတ်ပုံများတွင် မြင်ရသည့်အခါ လွန်စွာ အသားမည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခု မြန်မာများကတော့ အသားဖြူလာကြပြီ။
သာကီဝင်တို့သည် သူတစ်ပါး အမျိုးနှင့် သွေးနှောခဲသည်။ အမျိုးအချင်းချင်းသာ ပြန်ယူသည်က များသည်။ သာကီဝင် တစ်ပါးတည်း ပျူနိုင်ငံတှော ထူထောင်ပြီး မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ ရခိုင်တွင်လည်း သာကီဝင်မင်း တစ်ပါး အုပ်စိုးကာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ နှမဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်ဖြင့် လက်ဆက်ကာ အမျိုးဆက် ပြန့်ပွားစေခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာရာဇဝင်က မင်းများကတော့ တရုတ်မင်းသမီးလည်း ယူသည်။ ကုလားမင်းသမီးလည်း ယူသည်။ မွန်မင်းသမီးလည်း ယူသည်။ အစုံစားများဖြစ်သည်။ သာကီမျိုးဆိုလျှင် အစုံမစားနိုင်။
အဆိုပါစာအုပ်သည် ဗဟုသုတရသှောလည်း အလွန်အစွန်းရောက်သည်ဟု ထင်မိသည်။ ဘုရားရှင်နှင့် မြန်မာလူမျိုးများကို အမျိုး မတှောတှောအောင် စပ်ပြထားသည်။ အထောက်အထားများ တင်ပြထားသှောလည်း သူတင်ပြထားသည်များမှာ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ သမိုင်းများလို သုတေသန အထောက်အထားများ မဟုတ်ကြပါ။ အချုပ်ဆိုရလျှင် ဘုရားရှင်သည် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်။ မြန်မာတို့နှင့် မွန်ဂိုလွိုက် အနွယ်တူသာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့သည် သွေးများစွာ နှောခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:54:00 AM0comments Links to this post
Labels: Book Review, Idea
ရှောရိနေတဲ့ တိမ်တွေ ပြိုကျသောအခါ
ကိုယ်တစ်ခုလုံး စိုရွှဲသွားတာကို မိုးလို့ခှေါသတဲ့
လိုအပ်သူအတွက် ရောက်မလာတတ်တဲ့ သူမအတွက်
ကောင်းကင်ဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးပေါ့လို့ သူမပြောတဲ့အခါ
တိမ်တွေက ကျွန်တှော့ကို လာထိတယ်
ဒီနေ့တော့ မှတ်မှတ်ယယ ကြက်သီးတွေထလိုက်တာ ခဏခဏပဲလို့
20 June, 2007
Posted by NLS at 6/20/2007 11:49:00 AM0comments Links to this post
Venus and Moon
Have you known that?
မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့ စံတှောချိန် ဇွန်လ ၁ဂရက်နေ့ ည ၁ဝနာရီ ၅ဝမိနစ်ခန့်တွင် လသည် သောကြာဂြိုဟ် Venus ကို မြန်မာနိုင်ငံ အပှေါတွင် ၉ဝရာခိုင်နှုန်းခန့် ကြတ်သွားစေခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉ရက်နေ့ နေ့လည် ၁နာရီခွဲခန့်တွင် လသည် စနေဂြိုဟ်ကို အနီးကပ် ဖြတ်သန်းသွားပြန်သည်။
မြန်မာပြည်မှ ကမဿဘာကို ကျှောကြည့်နိုင်မည်ဆိုလျှင် အဆိုပါလသည် ၂ဝရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီ ၅မိနစ်ခန့်တွင် သိဟ်ရာသီ ခြသေဿင့ရုပ်မှ လင်းအားအကောင်းဆုံး Regulus ခှေါ မာဃနကဿခတ်ကို အခြားကမဿဘာခြမ်းတွင် လုံးဝ ကြတ်သွားစေသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ၂၄ရက်နေ့ ညနေ ငါးနာရီခွဲခန့်တွင် အရှေ့ဘက် ကောင်းကင်ယံ၌ စိတြကြယ်ခှေါ Spica ကြယ်အနီးမှ ဖြတ်သန်းသွားဦးမည် ဖြစ်သည်။
According to Veda, Take Care Everything! :)
Posted by NLS at 6/20/2007 11:40:00 AM0comments Links to this post
Published by Rupa Co, 2005
မဟာဘရတသည် ဟိနဿဒူတို့၏ အထွတ်အမြတ် ကျမ်းတစ်စောင် ဖြစ်သည်။ ဗျသရသေ့ ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒွါပရခေတ်တွင် ကုရုတိုင်းမှ ခတဿတိယမင်းသားများ ဖြစ်ကြသော ပဏဿဍဝမင်းသားများနှင့် ကောရဝမင်းသားများ တိုက်ခိုက်ကြသော စစ်ပွဲအကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် ကရစ်သျှနား ဘုရားရှင်သည် အမှန်တရားဖြစ်သော ပဏဿဍဝမင်းသားများဘက်မှ ကူညီခဲ့ပြီး လောကကို အမိုက်ဖုံးစေခဲ့သော ကောရဝ မင်းသားများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းစာသည် ဂရိမှ ဟိုမား၏ အိလျက်နှင့် ဩဒေးဆျုလို အီပစ်ခှေါ ဇာတ်တှောကြီး တစ်စောင်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်တှောထဲ၌ ကရစ်သျှနားက အဇဿဇုနမင်းသားကို စစ်မြေပြင်တွင် သင်ကြားပြသချက်များ သည်လည်း ဘဂဝဂ်ဂီတ ဟူသောအမည်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။
ကုရုမင်းဆက် ၁၄ဆက်မြောက်မှာ သျှတဿထနုဆိုတဲ့ မင်းအုပ်စိုးတယ်။ အမဲလိုက်ရင်း တစ်နေ့တော့ ဂဂဿငါမြစ်ကမ်းမှာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို တွေ့တယ်။ တကယ်တော့ သူမဟာ ဂဂဿငါ နတ်သမီးဖြစ်တယ်။ ဘုရင်က သူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်။ သူမက ဘယ်တော့မှ သူမဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ မမေးဖို့နဲ့ သူမဘာလုပ်လုပ် မမေးဖို့ကို တောင်းဆိုတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကလေးတွေမွေးတယ်။ မွေးပြီးတိုင်း ဂဂဿငါက ကလေးတွေကို မြစ်ထဲကို လွှင့်ပစ်ပြီး သတ်ပစ်တယ်။ နောက်ဆုံး ဘုရင်က မခံစားနိုင်တော့လို့ မေးပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါ သူမက သူမရဲ့ မူရင်း နတ်သမီးသဏဿဍာန်ကို ပြသပြီး ကျိန်စာကို ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမဟာ ကလေးကိုပိုက်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ ၁၆နှစ် ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဂဂဿငါဟာ အဲဒီကလေးကို ဘုရင်ထံကို လာပေးပါတယ်။ အဲဒီကလေးဟာ နောက်ပိုင်း အလွန်ထင်ရှားတဲ့ ဒေဝရတဿထဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ သျှတဿထနု မင်းဟာ တစ်နေ့တော့ အလွန်တရာ လှပတဲ့ ဆရဝတီဆိုတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရှိချစ်ကြိုက်မိပြန်တဲ့အခါ အဲဒီမိန်းခလေးက သူကမွေးတဲ့ သားကိုသာ ထီးနန်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ အဲဒီအခါ ဒေဝရတဿထမင်းသားဟာ ဖခင်အတွက် ဘယ်တော့မှ မိန်းမနဲ့ မပတ်သတ်ဘူး၊ လက်မထပ်ဘူး၊ နန်းမယူဘူးဆိုတဲ့ သစဿစာကို ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သူဟာ ဘီသမဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကောင်းချီးပေး ခံရတယ်။
သျှတဿထနုနဲ့ ဆရဝတီမှာ သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားတယ်။ ဒါပေမယ့် သားတှောကြီး စိတြဂဒါ သေဆုံးသွားတာမို့ အငယ် ဝိစိတြဝီရာကိုသာ နန်းတင်ရတယ်။ ဘီသမဟာ သူ့ညီဝမ်းကွဲ ဘုရင်အတွက် မင်းသမီးသုံးပါးကို သူကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်ရယူပေးတယ်။ အကြီးဆုံး မင်းသမီးက ဘီသမကြောင့် သူအရှက်ရတယ်ဆိုပြီး ကျိန်စာဆိုပြီး သေတယ်။ ဝိစိတြဝီရာဟာ မင်းသမီးနှစ်ပါးနဲ့ ကလေးမရဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရဝတီက ဘီသမကို သူ့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး နန်းတက်ဖို့ ပြောတယ်။ ဘီသမက လက်မခံဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရဝတီက သူ့အတိတ်ကို ပြောပြတယ်။ သူငယ်စဉ်က ရသေ့တစ်ပါးက သူ့ကိုကြိုက်လို့ မြစ်အလယ်မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး ကလေးတစ်ယောက် ချက်ချင်း မွေးပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ရသေ့ရဲ့ တန်ခိုးကြောင့်သူမဟာ အပျို ပြန်ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲဒီကလေးကတော့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဗျသရသေ့ ဖြစ်သွားကြောင်း အလိုရှိတဲ့အခါ ချက်ချင်းခှေါလို့ရကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဒေဝရတဿထမင်းသားဟာ ဗျသရသေ့ကို ခှေါစေပြီး ဝိစိတြဝီရာရဲ့ မိဖုရားနှစ်ပါးနဲ့ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းစေပါတယ်။ ပထမမိဖုရားဟာ ဗျသရသေ့ကို ကြောက်လန့်လို့ မျက်စိမှိတ်ထားတဲ့အတွက် မျက်စိမမြင်တဲ့ ဒရိတရသျှတရ မင်းသားကို မွေးဖွားပါတယ်။ ဒုတိယ မိဖုရားကတော့ မျက်စိမပိတ်ပေမယ့် ကြောက်လန့်နေတဲ့အတွက် ဖြူဖျော့တဲ့ ပဏဿဍုမင်းသားကို မွေးဖွားပါတယ်။ ဒရိတရသျှတရ မင်းသားကို ဂနဿဓာရီဆိုတဲ့ မင်းသမီးနဲ့ ပေးစားတယ်။ ပဏဿဍုမင်းသားကတော့ ကုနဿတီနဲ့ မဒြာရီဆိုတဲ့ မင်းသမီး နှစ်ပါးနဲ့ လက်ဆက်ပါတယ်။ ကုနဿတီမှာ ရသေ့တစ်ပါးပေးခဲ့တဲ့ မနဿတာန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အဲဒီမနဿတာန်ကို ရွတ်ရင် စိတ်ကူးရာ နတ်ဒေဝါရောက်လာပြီး လိုရာတောင်းလို့ရတယ်။ တစ်ခါက ကုနဿတီဟာ နေနတ်သားကို စိတ်မှာမှန်းပြီး အဲဒီမနဿတာန်ကို ရွတ်ဆိုရာက ကလေးတစ်ယောက် ရခဲ့ဖူးတယ်။ သူမဟာ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အဲဒီကလေးကို မြစ်မှာ မျှောလိုက်ရတယ်။ နေနတ်သားရဲ့ တန်ခိုးကြောင့် သူမဟာလည်း အပျိုဘဝ မပျက်ပါဘူးတဲ့။
တစ်ရက်တော့ ပဏဿဍုမင်းသားဟာ တောကစားထွက်ရင်း သမင်စုံတွဲကို တွေ့လို့ မြားနဲ့ပစ်သတ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီသမင်စုံတွဲက ရသေ့လင်မယားပါ။ အပျှောသဘောနဲ့ သမင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေခိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရသေ့တွေဟာ ပဏဿဍုမင်းကို တချိန်ချိန် မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံမိတာနဲ့ သေပါစေလို့ ကျိန်ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့် ပဏဿဍုမင်းဟာ မိဖုရားနှစ်ပါးနဲ့ တောထွက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကလေးလိုချင်တာကြောင့် ကုနဿတီဒေဝီကို မနဿတာန်ရွတ်ပြီး နတ်ဒေဝါတွေကို ပင့်ဖိတ်ပေါင်းသင်းဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကုနဿတီဟာ ပထမအကြိမ် ဓမဿမနတ်သားနဲ့ ယုဒဿဓိယှိတြိမင်းသား၊ ဒုတိယအကြိမ် လေနတ်သားနဲ့ ဘီမမင်းသား၊ တတိယအကြိမ် သိကြားမင်းနဲ့ အဇဿဇုနမင်းသား တို့ကို မွေးဖွားပါတယ်။ ပဏဿဍုမင်းဟာ နောက်ထပ် ကလေးလိုချင်ပေမယ့် ကုနဿတီက လက်မခံတော့တာကြောင့် သူမရဲ့ မနဿတာန်ကို မဒြာရီအတွက် ရွတ်ဆိုစေပါတယ်။ အဲဒီအခါ မဒြာရီဟာ အသဿသဝဏ်နတ်သားနဲ့ ပေါင်းသင်းပြီး နကုလနဲ့ သဟဒေဝ အမွှာမင်းသား နှစ်ပါးကို မွေးဖွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဏဿဍုမင်းဟာ သားငါးယောက်ရပြီး တစ်နေ့မှာ သူ့မိန်းမ မဒြာရီ ရေချိုးနေတာကို မြင်ရာက စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး အတင်း ဆက်ဆံမိပါသတဲ့။ အဲဒီအခါ ကျိန်စာကြောင့် သူဟာ ချက်ချင်းပဲ လဲကျသေဆုံး သွားပါတော့တယ်။ မဒြာရီလည်း ပဏဿဍုမင်းကို မီးသဂြဿငိုဟ်ချိန်မှာ အတူလိုက်ပါ ဆတဿတီးလုပ်ပြီး သေဆုံးသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကုနဿတီဒေဝီဟာ သားငါးယောက်ကို ခှေါယူပြီး နေပြည်တှောကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
ဒါက မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၅ဝလောက်ကို အကျဉ်းဆုံး ဘာသာပြန်ထားရုံပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပဏဿဍဝမင်းသား ငါးယောက် မွေးလာပုံ အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နေပြည်တှောမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒရိတရသျှတရရဲ့ မိဖုရား ဂနဿဓာရီကနေ မိစဿဆာလို ကောရဝမင်းသား တစ်ရာ့တစ်ယောက် မွေးဖွားပုံ၊ ပဏဿဍုမင်းသားတွေကို ထီးနန်းမပေးချင်လို့ အကောက်ကြံပုံ၊ ပဏဿဍုမင်းသားတွေ တောထွက်ကြပုံ၊ နတ်ဒေဝါတွေနဲ့ တွေ့ကြပုံ၊ ဒြှောပနီမင်းသမီးကို မင်းသားငါးယောက် လက်ထပ်ပုံ၊ ကရစ်သျှနားနဲ့ တွေ့ပုံ၊ ဟနုမန်နဲ့ တွေ့ပုံ၊ မင်းသားတွေ ဟိုဘက်ဒီဘက် စစ်တိုက်ကြပုံ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၁၅ဝဝကျှော ရှိပါတယ်။ မူရင်းသကဿကတစာပေမှာတော့ ကဗျာအပိုဒ်ပေါင်း တစ်သိန်းလောက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို တစ်ခါက ဦးမင်းဆွေ(သိပဿပံ၊သခဿငျာ)က တှောတှောကြီး အကျဉ်းချုံးပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးတယ်။ မစုံလင်ပါဘူး။ သကဿကတကနေ အဂဿငလိပ် ဘာသာပြန်ရေးသူ Ramesh Menon ကတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အိနဿဒိယနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြန်၊ သကဿကတဘာသာကိုလည်း ကျွမ်းကျင်၊ အဂဿငလိပ်လိုလည်း အရေးကောင်းတာမို့ ဖတ်ရတာ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။
ဒီစာအုပ် ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ မြန်မာတွေ ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ နတ်သိကြားတွေ၊ ဗြဟဿမာတွေ၊ လောကပါလနတ်တွေ ဆိုတာ ဟိနဿဒူနတ်တွေဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်တှောကြီးဟာ ဟိုမားရဲ့ အိလိယဒ်ထက် အများကြီး သာပါတယ်။ ရာမာယဏထက်လည်း ကောင်းတယ်။ အိနဿဒိယမှာ ယနေ့ထက်ထိ ဒီဇာတ်တှောထဲက ဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ချင်းစီကို ပမာထားပြီး လိုက်နာကျင့်သုံး ဝေဖန် အကဲဖြတ်နေကြတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဆရာကြီး ပါရဂူလို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပုဂဿဂိုလ်မျိုးကသာ အပြည့်အစုံ ဘာသာပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် မြန်မာဘာသာနဲ့ လူတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး စာအုပ်စင်ပှေါ တင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:37:00 AM0comments Links to this post
စာမူခွင့်ပြု ၇၈၉/ ၂၀၀၄ (၈)
ဆရာတှော ရွှေကိုင်းသားသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သတ်သော သုတေသန၊ အထောက်အထားများကို အများအပြား ရှာဖွေ လေ့လာ ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဤဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု စာအုပ်တွင် ပျူခေတ်မှစကာ လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦးအထိ ပြောင်းလဲလာသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကို တင်ပြထားသည်။ ရှေးခေတ် အခှေါအဝှေါများကိုလည်း ရှင်းလင်းထားသည်။ သရုပ်ဖှောပုံ များစွာကိုလည်း ဆရာတှောကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲထားသည်။ ဆရာတှောသည် သာသနာ့ဘောင်သို့ မဝင်မီက ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနတွင် ဓာတ်ပုံဆရာ၊ ပုံဆွဲဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ ဖူးသောကြောင့် ဆရာတှော၏ မှတ်တမ်းများမှာ စေ့စပ်သေချာလှသလို ရုပ်ပုံများကလည်း ပီပြင်လှသည်။ ဆရာတှောသည် ဤစာအုပ်ဖြင့် ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် သုတပဒေသာ စာပေဗိမာန်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ရုပ်တုများ၊ ရုပ်ကြွများ၊ နံရံဆေးများ၊ ပန်းချီများကို လေ့လာသည့်အခါ ထိုအရာများမှ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို အထူးသတိထား လေ့လာကြရသည်။ ပျူခေတ်ဝတ်စားပုံနှင့် ပုဂံခေတ် ဝတ်စားပုံ မတူကြချေ။ ပုဂံခေတ် ဝတ်စားပုံနှင့် အင်းဝခေတ် ဝတ်စားပုံသည်လည်း အများကြီး ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း မည်သည့် ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးခံရချိန် ဖြစ်ကြောင်း ယေဘုယျ သိရှိနိုင်သည်။
ယင်းစာအုပ်မှာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာလိုသူများ စုဆောင်းထားသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဈေးမှာ လူတိုင်းအတွက် သင့်တင့်ပြီး အမှန်စင်စစ် အထဲမှ အကြောင်းအရာများမှာ ထိုတန်ဖိုးထက် အဆမတန် ပိုပေသေးသည်။ ဆရာတှော ကိုယ်တိုင်ဆွဲသားသော ပန်းချီများစွာကပင် စုဆောင်းသူများအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပေသည်။ စာအုပ်စင်တွင် ဂုဏ်ယူစွာ တင်ထားသင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်ပင် ဖြစ်သည်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:34:00 AM0comments Links to this post
စာမူခွင့်ပြု ၁၁၆၇/ ၂၀၀၂ (၁၂)
အပင်များနှင့်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဒဏဿဍာရီဆန်ဆန် ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု တွေအကြောင်း အိနဿဒိယစာအုပ် တစ်အုပ်ကို အဓိကကိုးကားပြီး ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး၏ စာအုပ်များထဲတွင် ဤစာအုပ်လေးကို လူသိနည်းကြသည်။ အုပ်ရေကလည်း ၅ဝဝသာ ဖြစ်သောကြောင့် နည်းသည်ဟု ဆိုရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ ဆိုဒ်အသေးဖြင့် စာမျက်နှာက ၉ဝကျှောသာ ရှိသည်။ ဆီးဖြူ၊ သမန်းမြက်၊ ကသစ်၊ ရှားစောင်း၊ ညောင်ဗောဓိ၊ သဖန်း၊ ညောင်သပြေ၊ ဘန့်ပွေး၊ သက်ငယ်၊ ပြောင်ခါးမြက်၊ သရက်၊ ဒန့်သလွန်၊ ရခိုက်ငှက်ပျော၊ ပဒုမဿမာကြာ၊ စတြိ၊ စပါး၊ ဆပ်သွားစု၊ ရှား၊ ထနောင်း၊ ဥသျှစ်၊ မအူ၊ အလိုကျူ၊ သမန်းကျား၊ ပေါက်၊ တရုတ်စကား၊ မြက်၊ ဧကရာဇ်ပင်၊ လက်ပံ၊ သှောက၊ မြက်ဆိပ်ဖလူး၊ နှမ်းကြီး၊ သာလ၊ သခွတ်ဖို၊ မန်ကျည်း၊ ထောက့်ကြံ့၊ သစ်စိမ်း၊ ဆီးတှော စသော သစ်ပင်များအကြောင်း၊ ဒဏဿဍာရီအရ ယင်းအပင်များ မည်သို့ ဖြစ်လာသည် ဆိုသည့်အကြောင်း၊ မည်သည့် နတ်ဒေဝါများ စောင့်ရှောက်သည် ဆိုသည့် အကြောင်း၊ မည်သည့်အပင်နှင့် မည်သည့် နတ်ဒေဝါများကို ပူဇှောရသည် ဆိုသည့် အကြောင်းများကို ဖှောပြထားသည်။
ပုံပြင်များမှာ စေ့စေ့စုံစုံ မပါသောကြောင့် ဖတ်ရသည်မှာ အားမရ ဖြစ်မိသည်။ သို့သှော ထူးခြားသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်နေသောကြောင့် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ အချို့ ပုံပြင်များမှာ အဆိုပါသစ်ပင်နှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်သည် ဆိုခြင်းကို ရေရေရာရာ ဆိုမထားချေ။ မူရင်း အိနဿဒိယ စာအုပ်ကို မဖတ်ဖူး သေးသောကြောင့် ဆရာကြီး အနေဖြင့် ထိုပုံပြင်များကို ချုံ့ထားသည်လားဟု သံသယ ဖြစ်မိသည်။ သရုပ်ဖှော ပုံများကို ဝလုံးက ရေးဆွဲပေးထားသည်။ ဆရာကြီးသည် များသောအားဖြင့် ပုံပြင်တွေအကြောင်း၊ သမိုင်းမခိုင်လုံသော အကြောင်းအရာများ အကြောင်းကို ရေးခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်သည် ဆရာကြီး၏ ထူးခြားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပေသည်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:31:00 AM0comments Links to this post
Dictionary of South & Southeast Asian Art
အရှေ့တောင်အာရှ အနုသုခုမလက်ရာများ အဘိဓာန်
အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အနုပညာလက်ရာများနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန် ဖြစ်သည်။ စာအုပ်မှာ ၁၆၂မျက်နှာခန့်သာ ရှိပြီး စကားလုံး ၁ဝဝဝထက် မပိုပါ။ အဘိဓာန်တစ်ခု အနေဖြင့်မူ မစုံလင်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သှောလည်း အရေးပါ၊ အသုံးများသော စာလုံးများကိုသာ ကောက်နှုတ်ထားသောကြောင့် အသုံးဝင်လှသည် ဟုတော့ ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အိနဿဒိယ၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ ဗီယက်နမ်၊ သီရိလကဿငာ၊ ကမေဿဗာဒီးယား နိုင်ငံများမှ စကားလုံးများကို ပြဆိုသည်။ ကောင်းမွန်သော အချက်မှာ သရုပ်ဖှောပုံများ ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာကို လေ့လာမည်ဆိုလျှင် ဤစာအုပ်ကို ဝယ်ယူထားသင့်သည်။ ဤစာအုပ်မှာ အပြင်တွင် များများစားစား မတွေ့ရပေ။
မြန်မာပြည်တွင် အဘိဓာန်များကို သီးသီးသန့်သန့် တွေ့ရခဲသည်။ စစ်နှင့်ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ အနုပညာနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ ရှေးထုံးစဉ်လာများနှင့်ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်များနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ သမိုင်းနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန်၊ လူပုဂဿဂိုလ်များနှင့် ပတ်သက်သော အဘိဓာန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော အဘိဓာန် စသည်စသည်ဖြင့် သီးခြားစီ ရှိသင့်သည်။ မြန်မာစာပေတွင် ထိုသို့သော အဘိဓာန်များ အနည်းငယ် ရှိသှောလည်း မပြည့်စုံ မစုံလင်လှချေ။ မှတ်သား စုဆောင်းထားရှိသော အဘိဓာန်စာရင်းကို ပူးတွဲ ဖှောပြလိုက်ပါသည်။
1. ဦးဟုတ်စိန် ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်*
2. မင်းလှစံမြင့် စံမြင့်မှတ်စု
3. ဦးသုခ သုခမှတ်စု
4. မြန်မာစာအဖွဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်*
5. ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အနုသုခုမအဘိဓာန် *
6. ဒေါက်တာရီရီ သုတေသနအဘိဓာန်များမှတ်စု
7. ဦးသိန်းလှိုင် ခေတ်ဟောင်းမြန်မာ့သမိုင်း သုတေသန အဘိဓာန်*
8. ဦးမောင်မောင်တင် ရွှေနန်းသုံးဝေါဟာရအဘိဓာန်
9. တောင်ခိုး အရှေ့တောင်အာရှအနုသုခုမလက်ရာများအဘိဓာန်
10. စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း မြန်မာ့ရိုးရာပဋိမာသိပဿပံပညာ*
11. တိုက်စိုး ယဉ်ကျေးမှု အထိမ်းအမှတ်များ
12. သီရိဥဇနာ လောကဗျူဟာ
13. ရှင်နာဂသိန် ပုံပြဆေးအဘိဓာန်*
14. အရှင်ဩဘာသာဘိဝံသ သုတေသန သရုပ်ပြ အဘိဓာန်
*အမှတ်အသား ပြထားသော အဘိဓာန်များမှာ အတှောပြည့်စုံသည်ဟု ဆိုရမည့် အဘိဓာန်များ ဖြစ်သှောလည်း ကျန်စာအုပ်များမှာ မပြည့်စုံလှပါ။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:28:00 AM0comments Links to this post
Labels: Book Review, Dictionary
တန်ဖိုး ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ဘဒဿဒကမဿဘာတွင် ပွင့်တှောမူမည့် နောက်ဆုံးသော မေတဿတယျ ဘုရားရှင်အကြောင်း စုံစုံလင်လင် သုတေသန ပြုထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် အဆိုပါ ဘုရားရှင်နှင့် ပတ်သတ်၍ လေ့လာလိုလျှင် မြန်မာဘာသာဖြင့် စာအုပ်အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည် ထေရဝါဒ ပိဋကတ်စာပေများ၊ အထကထာများ၊ အနဂတံဝင်ကျမ်းများ၊ ရာဇဝင်၊ သမိုင်း၊ ကျောက်စာများ၊ မဟာယာန ဗုဒဿဓဘာသာ ကျမ်းဂန်များကို လေ့လာပြီး ပြုစုခဲ့ကြောင်း ဖှောပြထားသည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒဿဓဘာသာတွင် ဗုဒဿဓဘုရားရှင်နှင့် ဗောဓိသတဿတဘုရားလောင်းတို့သည် သီးခြားစီ ဖြစ်သည်။ ဘုရားလောင်းဟူသည် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ရန် ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ဆဲဖြစ်ပြီး ဘဝများစွာ ဖြတ်သန်းရန် ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ဘုရားရှင် အဖြစ်မှာတော့ တရားမှန်သမျှကို အကုန်အစင် သိပြီးဖြစ်ကာ ဘဝခနဿဓာ အသစ်ဖြစ်ဖို့ မရှိတော့ပြီဖြစ်သည်။ ဟိနဿဒူဘာသာတွင် ဂေါတမဘုရားရှင်ကို ကရစ်သျှနားနောက် ပွင့်ခဲ့သော ဗိသဿသနိုး၏ အဝတာရ တစ်ပါးအဖြစ်ပြသည်။ ထို့နောက်တွင် ကလ်ကီ အမည်ရှိသော ဘုရားရှင် ပွင့်မည်ဟု ဆို၏။ ဂေါတမ ဘုရားရှင် သက်တှောထင်ရှား ရှိစဉ်က မေတဿတယျဘုရားလောင်း အဇိတရဟန်းအား ဗျာဒိတ်ပေးကြောင်းကို ထေရဝါဒ ကျမ်းစာများတွင် အထင်အရှား ရှိသည်ဟု ဖှောပြထားသည်။ သို့ရာတွင် ထေရဝါဒ စာပေများတွင် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မပါဝင်ပေ။ ကျမ်းဂန်အထောက်အထားများအရ အလောင်းတှောသည် တုသိတာပြည်တွင် နတ်သားဖြစ်နေဆဲဟု ဆိုသည်။ အလောင်းတှော နတ်သားနှင့် ဖူးတွေ့ခဲ့ရသူများ၊ တိမ်မြုပ်နေသော အတိတ်ဘဝ ဖြစ်စဉ်များ၊ ရုပ်တုဆင်းတု ပန်းချီလက်ရာ ဓါတ်ပုံများ၊ ဘုရားရှင်တို့၏ အထွေထွေ အထူးထူးသော စက်လကဿခဏာများ စသည်တို့ကို ဤစာအုပ်တွင် တွေ့ရသည်။
ဤစာအုပ်သည် မေတဿတယျဘုရားရှင်ကို မျှောကိုး၍ အယူသီး ရေးသားထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ စေ့စေ့စုံစုံ သုတေသနပြု မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဘာသာအယူဝါဒ အသီးသီးမှ ကွဲပြားပုံများကို နှိုင်းယှဉ်ပြသည်။ ဗုဒဿဓဘာသာ ထွန်းကားရာ အခြားနိုင်ငံများမှ ဘုရားလောင်းနှင့်ဆိုင်သော အယူအဆ အမျိုးမျိုးကို ပြသည်။ အထောက်အထား ရုပ်ပုံများ စုံစုံလင်လင် တင်ပြထားသည်။ ဘုရားရှင်တို့နှင့် ပတ်သတ်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာတို့ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာစာပေတွင် လိုနေသော ကွက်လပ်တစ်ခုအတွက် အလွန်ပြည့်စုံသော စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ စာအုပ် ဂဝဝခန့်ကို ကိုးကား ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေးထက် သုတေသန စာပေမျိုးဟူ၍ ထင်မြင်မိသည်။ စာအုပ်စင်တွင် ရှိသင့်သော စာအုပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ဈေးမှာ ကြီးမြင့်သှောလည်း ၆၆၄မျက်နှာရှိသော အဖိုးတန်သည့်စာ၊ သားရေအဖုံး ခန့်ချုပ်နှင့် အတွင်းမှ ဓါတ်ပုံ၊ ပန်းချီ များစွာတို့က ထိုဈေးနှင့် ထိုက်တန်သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:26:00 AM0comments Links to this post
Semiotic ဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် သကေဿငတများဖြင့် ဖှောညွှန်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ Signs and Signifying Practice ဟုလည်း မှတ်သား၍ရသည်။ Semiotic ကိုလေ့လာသည့်အခါ Signifier နှင့် Signified ဆိုသော စကားနှစ်ခုကို သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ Signifier ဆိုသည်မှာ အဓိပဿပာယ် တစ်ခုကို ဖှောညွှန်းသော အရာဖြစ်သည်။ Signified ဆိုသည်ကတော့ ထိုအဓိပဿပာယ်က ဖှောညွှန်းခြင်းကို ခံရသော အရာဖြစ်သည်။
မောင်လှသည် ဆိုးသွမ်းသော လူကလေးဖြစ်သည်
အထက်ပါ စကားတွင် ဆိုးသွမ်းသောသည် Signifier ဖြစ်သည်။ မောင်လှသည် Signified ဖြစ်သည်။ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသန သဘောပင်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာမှာ စာပေတွင်သာ ရှိနေသည်မဟုတ်။ ပညာရှင်များက Semiotic ကို Visual Art များတွင်ပါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုလာကြသည်။ သကေဿငတ Signs များကို အသုံးပြုပြီး နက်နဲရှုပ်ထွေးသော အဓိပဿပာယ်များကို ဖှောကျူးကြသည်။
မည်သို့သော အနီရောင် ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို ထင်ရှားစေရမည်။ ကြည်လင်သော အနီရောင်လော၊ မှိုင်းအုံ့သော အနီရောင်လော။
မည်သည့် အတွက်ကြောင့် အနီရောင် ဖြစ်နေရသနည်း။
အနီရောင်သည် သူချည်းသက်သက်သာ အနီရောင် ဖြစ်နေပါက တန်ဖိုးများစွာ ရှိမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို အသုံးပြု၍ သှောလည်းကောင်း၊ သူ့ကို အသုံးပြုခံအဖြစ် ထား၍သှောလည်းကောင်း တစ်ခုခုကို ဖှောညွှန်းရ ပေတော့မည်။
အနီရောင်ပှေါတွင် လူများသေကြေနေပုံကို ပုံကြမ်းသာသာ ရေးခြစ်ထားမည်။
ထိုအခါ ထိုအနီရောင်သည် အဓိပဿပာယ် များစွာ ရှိလာသည်။ ထိုပုံကြမ်းသည်လည်း အနီရောင်ပှေါတွင် အသက်ဝင်လာမည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် တစ်ခုကိုတစ်ခု ဖှောညွှန်းနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သှော မပြည့်စုံသေးပါ။ ထိုပန်းချီကားချပ်တွက် Signသည် ဘာလဲ?။ လောကတွင် နေရာအနှံ့ လူအများအပြား သေနေကြသည်။ ထိုပန်းချီကားချပ်ပှေါမှ လူများသည် ဘယ်ကလဲ။ ဘာကြောင့်သေနေတာလဲ။ အနီရောင်က သေခြင်းတရားကို ထိုပန်းချီကားပှေါတွင် ကိုယ်စားပြုနေသှောလည်း တိကျသော ကိုယ်စားပြုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။
ထို့နောက် တစ်ဆင့်တက်ကာ ပန်းချီဆရာက ထိုပန်းချီကားပှေါတွင် ဂျာမန်နာဇီ သကေဿငတလေးကို ခပ်သေးသေးပင် မထင်မရှား ရေးသွင်းလိုက်သည်။ ပန်းချီကား ကြည့်ရှုသူများသည် အနီရောင်ကိုလည်း မြင်သည်။ လူသေများကိုလည်း မြင်သည် နောက်ဆုံး နာဇီသကေဿငတကို မြင်သည်။ ထို Signifier သေးသေးလေးကြောင့်ပင် ပြီးပြည့်စုံသော ပန်းချီကား တစ်ချပ် ဖြစ်သွားသည်။
စဉ်းစားကြည့်လျှင် အဖြူရောင် ကင်းန်ဗတ်စ်စပှေါတွင် လူသေတွေကိုချည်း ရေးထားမည်။ အနိဋဿဌာရုံ ပန်းချီကား တစ်ချပ်သာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိုပန်းချီကားကို အနီရောင်ရင့်ရင့်ဖြင့် ဖြည့်စွက်သည်။ တောက်ပစွာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသော အနိဋဿဌာရုံ ပန်းချီကား ဖြစ်လာမည်။ ထို့နောက် ထိုပန်းချီကားတွင် အဆိုပါ သကေဿငတလေး ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် ထိုပန်းချီကားသည် မည်သည့်အရာကို ညွှန်းဆိုချင်သော အနိဋဿဌာရုံ ပန်းချီကားဟူ၍ ဖြစ်လာတော့သည်။
ထိုအရာမှာ ရိုးရှင်းသော ပန်းချီကား တစ်ကားဖြင့် စဉ်းစားကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ် သကေဿငတပန်းချီများသည် ထိုထက်ပို၍ အဓိပဿပာယ် နက်နဲပေလိမ့်မည်။ ဉာဏ်ကွန့်မြူး၍ စဉ်းစားကြရန်သာ ရှိသည်။ ထိုသို့ စဉ်းစားရန်အတွက် ဗဟုသုတ လိုသည်။ ဗဟုသုတ မရှိလျှင် နာဇီသကေဿငတ မြင်သှောလည်း နာဇီသကေဿငတဟု မမြင်ဘဲ ဓမဿမစကြ လကဿခဏာဟု ထင်မှတ်လိုက်လျှင် ထိုပန်းချီကား၏ အဓိပဿပာယ်သည် ပန်းချီဆရာ ပေးချင်သော အဓိပဿပာယ်မှ သွေဖယ်သွားပေလိမ့်မည်။
မြန်မာပြည်မှ ဆာရီရယ်လ်လစ် ပန်းချီကားများတွင် ယင်းဆာရီရယ်လ် စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ပုံများကို တွေ့ရသှောလည်း Signifer ပိုင်းတွင် လွန်စွာအားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ Signified ဖြစ်သော အရောင်၊ ရေးဆွဲနည်းစနစ်၊ ဖန်တီးမှု တို့ကြောင့် မျက်မြင် ပန်းချီကား အနေဖြင့် အားကောင်းသှောလည်း သကေဿငတ ဖှောကျူးမှု အပိုင်းတွင် အားနည်းသောကြောင့် ထိုပန်းချီကားများသည် တစ်ဝက်သာ အသက်ဝင်သည်။ တစ်ဝက်မျှသာ အဓိပဿပာယ်ရှိသည်။ တွေးတောခံစားချက်ကို ဦးစားမပေးသောကြောင့် ကြည့်ရသည်မှာ အရသာပေါ့လွန်းသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အိပ်မက်တိတ်ထုံကျမ်း များစွာကို လူများ ဖတ်ကြသည်။ မိမိညက မြင်မက်သော အိပ်မက် ကောင်းမကောင်း အတွက်သာ ကြည့်ရှု အသုံးချကြသည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်တော့ ထိုအရာများကို ပန်းချီကားချပ်များထဲသို့ ယူလာသည်။ လူများကလည်း ထိုကျမ်းများကို အိပ်မက်သက်သက်အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ အနုပညာထဲတွင်ပါ ခံစားရလာသောကြောင့် လေ့လာလိုက်စား လာကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ထိုနိုင်ငံတို့၏ အနုပညာ အဆင့်အတန်းမှာ တဖြည်းဖြည်း မြင့်မားလာသလို ပရိသတ်များ၏ အနုပညာ ခံစားတတ်မှု အားများလည်း ကောင်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တှောတို့ အနေဖြင့်လည်း ပန်းချီဆရာပင်ဖြစ်စေ၊ ပရိသတ်ပင်ဖြစ်စေ ထိုထိုသော ဘာသာရပ်များကို လိုက်စားတတ် လာမည်ဆိုလျှင် ထိုထိုသော အနုပညာရပ်များကို စနစ်တကျပင် ခံစားတတ်လာမည်မှာ မလွဲပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
Posted by NLS at 6/20/2007 11:21:00 AM0comments Links to this post
Labels: Arts, Idea
ပထမအဆင့် သူ့မျက်နှာက ဝက်ခြံနဲ့ အမာရွတ်တွေကို ဖျောက်ပါတယ်။ အဲလို ဖျောက်ရာမှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသား၊ အရိပ်၊ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အပ်စပ်နိုင်သမျှ အပ်စပ်အောင် အကွာအဝေး နေရာစုံက ကြည့်ပြီး ညှိရပါတယ်။ ပြီးရင် အလင်းအမှောင် အနည်းငယ်တင်ပြီး Liquify နဲ့ ပါးစပ်၊ ပါး၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံး စတာတွေကို ပြင်ပါတယ်။ မလိုချင်တဲ့ သူ့ဘယ်ဘက် မေးရိုးနားက အရေးအကြောင်း အချို့ကို ဖျက်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းမွှေး တွေကိုလည်း ဖျက်ပစ်ပြီး မူလအသားအရောင်နဲ့ ညှိယူပါတယ်။ မျက်စိနှစ်လုံးကို စိုပြည်တောက်ပအောင် လုပ်ယူပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒုတိယပုံ ရလာပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ် ထင်ရပေမယ့် ဒုတိယပုံဟာ Retouch လုပ်တာ များသွားလို့ သိပ်သဘာဝ မကျပါဘူး။ အသားတွေက Textures တွေနည်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီပုံရဲ့ Red Channel ကိုမှတ်သားပြီး Noise အနည်းငယ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးပုံကို သေချာကြည့်ရင် ဒုတိယပုံထက် ပိုပြီး သဘာဝကျတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by NLS at 6/18/2007 06:47:00 PM0comments Links to this post
Labels: Friend, Photography, Photoshop
ကလောမှာ ပလောင်တောင် တက်တုန်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေးပါ။ အကဿငျီအနွမ်း အကြေလေးနဲ့ လွယ်အိတ်သေးသေးလေးနဲ့။ ဆင်းရဲပေမယ့် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးရှိတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ သူ့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ ခါးထောက်ပြီး အက်တင်ပေးတယ်။ ဒီနေ့တော့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အဲဒီကလေးလေး ဓါတ်ပုံကို ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပှေါရွာကလေးက ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်ကို သူအိပ်မက်တောင် မက်ဖြစ်မယ် မထင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ကျွန်တှော တတ်နိုင်သလောက် ပို့ပေးလိုက်တယ်။
သူ့မူရင်းပုံက အရိပ်ထဲ ရောက်နေလို့ နဲနဲမှောင်ပါတယ် (ကျွန်တှော ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် သဘာဝအရောင်တွေ ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ ဖလက်ရှ် သိပ်မသုံးဖြစ်ပါ)။ ယိုးဒယားက ကမ်းခြေတစ်ခုပုံကို နောက်ခံထားဖို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူ့ခနဿဓာကိုယ် သီးသန့်ကိုပဲ Extract အသုံးပြုပြီး ဖြတ်ထုတ်ပါတယ်။ Extract အသုံးပြုတဲ့အခါ Smart Highlighting ဆိုတာလေးကို Open လုပ်ပြီး ဂရုတစိုက် ဖြတ်ပါတယ်။ ဒီဟာကိုသုံးရင် ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ တခါတည်း OK မလုပ်သင့်ပါဘူး။ Preview အရင်လုပ်ပြီး လိုနေတာတွေ ပိုနေတာတွေ ကြမ်းနေတာတွေကို Cleanup, Edge Touchup Tool တွေအသုံးပြုပြီး အသေးစိတ် ပြင်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေကို ဖြတ်ရာမှာ အရမ်းဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဖြတ်တာ မကောင်းရင် ဆံပင်တွေက သဘာဝ မကျပါဘူး။ လုံးလုံး ထွေးထွေးကြီး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အဲဒီပုံကို စိတ်တိုင်းကျတဲ့အခါ လေယာတစ်ခု အနေနဲ့ ထားလိုက်တယ်။ ပြီးရင် အကဿငျီသက်သက်ကို Lasso အသုံးပြုပြီး မှတ်သားကာ Masking လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အနားစွန်းတွေကို Feather အနည်းငယ် ပေးရပါတယ်။ သူ့အကဿငျီက ရိုးလွန်းတော့ Hawaii Shirt ပုံစံဖြစ်အောင် သစ်ရွက်တွေကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို အပှေါက အုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် ခုနက လေယာ အထက်မှာ Clipping Mask လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အကဿငျီအပှေါမှာ ဒီဇိုင်းထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီလေယာကို Opacity လျှော့။ Blending Mode Overlay ထားလိုက်တဲ့အခါ သဘာဝကျတဲ့ အကဿငျီပုံစံ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက် အလင်းရောင်ကို စဉ်းစားပါတယ်။ ပင်လယ်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံက အလင်းရောင် ဘယ်ဘက်က ဝင်တယ်။ ကလေးပုံက အလင်းရောင် အရှေ့က ဝင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကို ချိန်ရပါတယ်။ လေယာနှစ်ထပ်လောက် လုပ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် အလင်းရောင်တွေ ပေးရတယ်။ ပြီးရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Mode ထပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ လိုချင်တဲ့ အရှေ့ဘက်ကဝင်တဲ့ ရွှေအိုရောင် ခပ်မှိုင်းမှိုင်းအလင်း ပုံစံ ရလာပါတယ်။
ဓါတ်ပုံပြင်တာမှာ အဓိကက စိတ်ရှည်မှုပါ။ ဓါတ်ပုံကောင်း တစ်ပုံရဖို့ အချိန်အများကြီး ပေးရပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြင်တဲ့ပုံနဲ့ အချိန်ပေးပြီး ပြင်တဲ့ပုံ လုံးဝမတူပါဘူး။ ကျွန်တှောကတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပြင်ရင် အနည်းဆုံး အချိန်တစ်ရက် ယူပြီး ပြင်ဖြစ်တယ်။ Tools တွေ Functions တွေမျိုးစုံ သုံးကြည့်တယ်။ သူများလုပ်တဲ့ ကျူတိုရီရယ်လ်တွေ လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်။ ပိုက်ဆံမရပေမယ့် ဒါက ကိုယ်ဝါသနာ ပါရာမို့ တစ်ပုံပြင်တိုင်း ပညာတစ်ခု တိုးပါတယ်။
Posted by NLS at 6/18/2007 06:34:00 PM0comments Links to this post
Labels: Photography, Photoshop
Sorry for your Comments
I had deleted some of my posts for many reasons. Here only 918 posts are left. I do sorry for those who has written comments there. I wish I could go abroad for my last lifetime.
Posted by NLS at 6/16/2007 09:44:00 AM0comments Links to this post
Play around with Liquify effect
Model: Zay Zay Moe Thaw :P
Photo Retouching: NLS
Posted by NLS at 6/13/2007 12:25:00 PM0comments Links to this post
A note ofaFool
အသံသာမြည်တယ် စူးရှမှုမရှိတော့သော နှလုံးသားတစ်ခုအကြောင်း
သင့်ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး
ကဗျာဆရာတစ်ယောက်အတွက် ကာရံနဲ့ သံစဉ်တွေ
ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်အတွက် မျဉ်းတွေ အရောင်တွေ စုတ်ချက်တွေ
လမ်းဘေးက လူတစ်ယောက်အတွက် နေစရာအိမ်တစ်လုံး
သီချင်းရေးဆရာအတွက် နှလုံးသားရဲ့ ဒဏ်ချက်တွေ
အရူးတစ်ယောက်အတွက် ခေါင်းထက်က ပန်းတစ်ပွင့်
အဲဒီလို အမြင်တွေ မတူတတ်တာ သင်သိပါသလား
စကားတွေဟာ လမ်းကြောင်း မှားလာတယ်
နားမလည်နိုင်တာ ပြသဿသနာတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်
အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးသက်သက် နှစ်လုံးအတွက်
Posted by NLS at 6/11/2007 12:14:00 PM0comments Links to this post
Master! Khin Maung Yin
ဆရာကြီး ခင်မောင်ရင်နှင့် ကျွန်တှော
ဇွန်လ ၉ရက်၊ ၂၀၀၇
အနှစ်နှစ်ကာလ လုပ်ချင်ခဲ့သော ကျွန်တှော့ဆနဿဒတစ်ခု ပြည့်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက တွေ့ဖူးမြင်ဖူး ရောက်ဖူးချင်ခဲ့ သှောလည်း အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းတွေကြောင့် မရောက်ဖြစ်ခဲ့သော ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်ရင်ဆီသို့ အရောက်သွားခဲ့သည်။
ကျွန်တှောတို့ရောက်တော့ ဆရာကြီး ခင်မောင်ရင် က ကုလားထိုင်တစ်ခုမှာ ထိုင်နေရင်းက ထကာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုသည်။ သူ့ထံသို့ လာသူများကို ထိုသို့ပင် ကြိုဆိုတတ်ကြောင်း ကျွန်တှော သိထားပါသည်။ ဆရာကြီး၏ အခန်းတစ်ဝိုက်တွင် ဘက်ခ်ျ၏ ပီယာနိုသံက ပျံ့လွင့်နေသည်။ ထို့နောက် ဆရာကြီးနှင့် ကျွန်တှော စကားစမြည် ပြောဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး၏ ပန်းချီကားများအကြောင်း၊ ရုပ်ရှင်ကားအကြောင်း၊ အနောက်တိုင်း အနုပညာများအကြောင်း၊ မြန်မာ ပညာရှင်များအကြောင်း အစုံပင်။ ကျွန်တှောသည် ထိုဘာသာရပ်များကို အပတ်တကုတ် ဆည်းပူးခဲ့ဖူးသောကြောင့် သူပြောလိုသောအရာ၊ သူ့စိတ်ခံစားမှု၊ အနုပညာ ဆိုလိုရင်းများကို နားလည်နိုင်ပါသည်။
ဆရာကြီးရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချို့မှာ မွန်ဒရီယန်၊ ဂိုဂန်၊ မိုဒီဂလျာနီ တို့ကို တွေ့ရပါတယ်
အရမ်းကြိုက်တာကိုး။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိုဒီဆိုပြီးကို လုပ်ခဲ့တာ။ မွန်ဒရီယန်လည်း အရမ်းကြိုက်တာ ကိုယ်က အာခီတက်ခ် ဆိုတော့။ သူတို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ မရှိဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲ။ သူတို့ပုံစံအတိုင်းကို လိုက်ရေးထားတာတွေ ရှိဖူးတယ် (ထိုသို့ပြောပြီး သူ့ပန်းချီကားများကို ဒါက ဘယ်သူ့ပုံစံ၊ ဒါက ဘယ်သူ့နည်းစနစ် စသည်ဖြင့် ပြပါတယ်။ ဆရာကြီးကို အလွန်လေးစား သွားမိတယ်။ ကျွန်တှော တွေ့ချင်မိသော ရိုးရှင်းသော စိတ်ဓါတ်ကို ဆရာကြီးထံတွင် တွေ့ရသည်။ သူနှစ်သက်သော၊ လေးစားသော ပညာရှင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံယူရင်း ဆွဲခဲ့ဖူးကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးရဲ့ နှမလက်လျော့ကားကို ကျွန်တှော မကြည့်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီး ဦးမိုးသူ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကြောင့် ဒီကားအကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တှောက စကဿငာပူမှာ ဗွီဒီယိုအတ်ကို သင်ယူနေချိန်ပါ။ ဆာဗေးဒိုးလ် ဒါလီရိုက်တဲ့ ကားတွေ ကြည့်ရှုမိချိန်မှာ နှမလက်လျော့ကားမှာ ဆရာကြီး ပြောချင် ပြချင်တဲ့ အဓိကအရာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ဆရာ့ကို အလွန်လေးစား သွားမိပါတယ်။ အာရှဘက်မှာ ဒီလိုကားဟာ တှောတှောရှားတယ်၊ ဂျပန်က ကူရိုဆားဝါးတို့ကို ယှဉ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကားမအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။
အမှန်တော့ ကိုယ်က ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာ။ (ဆရာကြီး ပြောချင်သော အရာမှာ စကားများ၊ အမူအရာများ များစွာ မပါဝင်ဘဲ လူတို့၏ အတွင်းစိတ်ကို လှုပ်ရှားစေသော နည်းဖြစ်သည်။ ထိုအနုပညာ အကြောင်းကို အကြမ်းသိလိုလျှင် ထိုနေရာသို့ သွားပါ)။ ဒီကသရုပ်ဆောင်တွေက လှုပ်ချင်တယ်။ ပရိသတ်ကလည်း လှုပ်မှ စကားတွေ အများကြီးပြောမှ ကြိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမူအရာ အနေအထားကို ရဖို့ ငွေပေးရတယ်။ ငွေနဲ့ဆက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အရာကို သူတို့ နားမလည်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်ကို လုံးဝစွန့်လွှတ် ပစ်လိုက်တယ်။
အဲဒီဇာတ်ကားဟာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အမြတ်တနိုး ပြသသင့်တဲ့ ကားပါဆရာ။ အခုအချိန်မှာသာ ပြနိုင်မယ်ဆိုရင် အနောက်တိုင်းသားတွေ အရမ်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ကျွန်တှောတို့ဆီမှာ ဒီလို ကားမျိုး ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ။
အင်း အဲဒီဇာတ်ကားကို ဖလင်ပြန်ဆေးဖို့ ပြောကြသေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ငွေမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ဗြိတိသျှဘားမားက ကိုနေဝင်းတို့ကို အားလုံးလွှဲထားလိုက်တာ ကြာပြီပဲ။ ဇာတ်ကားက ရှုံးပေမယ့် ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ မြတ်ပါတယ်။ အဲဒီကရတဲ့ ငွေနဲ့ ကိုယ်တို့သူငယ်ချင်းတွေ တစ်နှစ်လောက် ကောင်းကောင်း စားသောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ (ထိုသို့ပြောရင်း ဆရာကြီးက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောပါသည်)
ဆရာကြီးခင်ဗျား ကျွန်တှော့အနေနဲ့ အခုမြန်မာတွေ ရေးနေကြတဲ့ အနုပညာ အယူအဆတွေ နည်းစနစ်တွေ အကြောင်းကို ဘယ်လိုဖတ်ဖတ် နားကို မလည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က အနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို မြန်မာမှုတွေ ပြုပစ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းချီဆွဲဖူးသူ မဟုတ်ရင် ပန်းချီအနုပညာကို ထဲထဲဝင်ဝင် ခံစားရေးလို့ ရပါ့မလားလို့ ကျွန်တှော သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ အယူအဆ ခံစားချက် သက်သက်သာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ တချို့သူတွေရေးတဲ့ ဟာတွေကို ဘယ်လိုမှ ခံစားနားလည်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တှော့အနေနဲ့ အဂဿငလိပ်စာကို အရမ်း မကျွမ်းကျင်ပေမယ့် အဲဒါတွေကို အဂဿငလိပ်လို ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရရင် ရှင်းခနဲ ထင်းခနဲ နားလည် သဘောပေါက်သွားမိပါတယ်။
ကိုယ်လည်း ဇှောဇှောအောင် ရေးတာတွေ ဖတ်ကြည့်တိုင်း နားမလည်ဘူးဟ။ အမှန်က အဲဒီစကားတွေကို ကိုယ်သိပေမယ့် မြန်မာလို အဓိပဿပာယ် ပြန်လိုက်တော့ ဘာကြီးပါလိမ့်ဆိုပြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတွေကို မြန်မာပြန်တာ မကောင်းဘူး။ သူ့ဘာသာ ထားလိုက်တာ ကောင်းတယ်။ ကိုယ်တိုင် မရေးဖူးရင်လည်း ဘယ်လိုလုပ် ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားဒါတွေသိလားမေးရင် မသိဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဆရာလက်ရှိဆွဲနေတဲ့ ကားတွေအကြောင်း ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ
မမြင်ဘူးသေးတဲ့ အရာတွေ ဆွဲနေတယ်။ တစ်ခုခုနဲ့ တူသွားမှာ အရမ်းကြောက်တယ်။ ဟိုနေ့က တစ်ယောက်ကလာပြီး ခင်ဗျား ပန်းချီကားက လှလိုက်တာဗျာ။ အရောင်တွေကလည်း ကောင်းဆိုပြီးမှ ဪနိုင်ငံခြားဆေးနဲ့ ဆွဲတာကိုးလို့ ပြောတယ်။ သေရော။ ဟားဟား။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း ပန်းချီကားတွေ ကောင်းလိုက်တာ ပြောလာရင် နိုင်ငံခြားဆေး သုံးတာကိုးလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ။ (ဆရာကြီးသည် ၂၄နာရီလုံး စာဖတ်လိုက် ပန်းချီဆွဲလိုက် သီချင်းနားထောင်လိုက်ဖြင့် နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ဂီတသံများသာ ဆရာကြီး၏ စိတ်ကို လှုံ့ဆှောသော အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာကြီး၏ ပန်းချီကားများကို လေ့လာလျှင် ဆရာကြီး နားထောင်သော ဂီတအကြောင်းကိုလည်း နားလည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်)
ဆရာပှေါဦးသက်အကြောင်း ဆရာရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။
ပှေါဦးသက်က ပန်းချီရေးတယ်။ သူ့ကားတွေက အခုဆို သိန်းလေးငါးရာ ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောတယ်။ ကိုယ့်မှာ အရင်က သူ့ပန်းချီကားတွေ ရှိတာပေါ့။ လိုချင်ရင် ယူယူထားလိုက်တယ်။ အချင်းချင်းမို့ ပြောနေစရာတောင် မလိုဘူး။ အထင်လည်း မကြီးဘူး။ ၂၅ဝလောက်ရရင် ရောင်းစားပစ်လိုက်ရော။ သူက ညာလက် ဗုံးထိလို့ ပြတ်သွားတော့ ဗယ်လက်နဲ့ ပန်းချီဆွဲခဲ့တာ သိပ်တှောတယ်။ (ဆရာကြီး ဆိုလိုသော အထင်မကြီးဘူးဆိုသည်မှာ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမို့ ပြောသော စကားသာ ဖြစ်သည်။ ဆရာပှေါဦးသက်ကို ဆရာကြီး ဘယ်လောက် ချစ်ကြောင်း၊ လေးစားကြောင်း သူ့စာများတွင် တွေ့နိုင်သည်)
ဆရာကြီးကားတွေလည်း အခုဆို သိန်းပေါင်းများစွာ တန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာကားတွေ အများကြီး ဆွဲခဲ့တာပဲ။ ပိုက်ဆံတွေ ကုန်ပြီလားဆရာ (သက်သက်မေးသော မေးခွန်းဖြစ်သည်)
ဟေဟုတ်လား။ ကိုယ့်ဆီလာပြီး ယူချင်တဲ့သူက ယူတာပဲ။ ပိုက်ဆံပေးချင်တဲ့သူက ပေးတာပဲ။ မပေးချင်တဲ့ သူကလည်း မပေးဘူး။ တစ်ချို့လည်း ဒီလောက်တောင်းပေမယ့် ဒီလောက်ပဲ ပေးမယ်ဆိုပြီး ပေးချင်သလောက် ပေးကြတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ပန်းချီဆွဲနေရရင် ပြီးတာပဲ။ ပြပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကားနှစ်ဆယ် သုံးဆယ် ယူသွားကြတယ်။ ပြပွဲလည်း ဖြစ်မလာဘူး။ ပန်းချီကားတွေလည်း ပြန်ရောက်မလာတော့ဘူး။ မပြောချင် တော့ပါဘူး။ သူတို့ လိုချင်တဲ့အချိန် ရောက်လာတာပဲ။ ပြီးရင် လိုချင်တဲ့ကားတွေ ကောက်ယူသွားကြတာပဲ။ ပေးချင်သလောက် ပေးသွားကြတာပဲ။ မပေးချင်လည်း မပေးဘူး။ (ထိုသို့ပြောပြီး ဆရာကြီးက တစ်ယောက်ချင်းဆီ အကြောင်း ပြောပြပါသည်။ အချို့သူများမှာ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်)
ဆရာကြီးကို ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံကြသည်ကို ကျွန်တှော လွန်စွာမှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။ သူတို့အနေဖြင့် ဆရာကြီး၏ ပန်းချီကားများကို ရောင်းချပြီး သိန်းပေါင်းများစွာ ရရှိနေချိန်တွင် ဆရာကြီးကျေးဇူးကို သိတတ်ကြဖို့ ကောင်းပါသည်။ ဆရာကြီးက ဘာမှ မလိုအပ်ဘူးဟု ပြောနေသှောလည်း ဆရာကြီးတွင် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေကြောင်း သူတို့ သိဖို့ကောင်းသည်။ ဆရာကြီး ယခင်က နေထိုင်ခဲ့သောအိမ်မှာ တဲသာသာသာ ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး၏ အမေရိကန်မှ တပည့်တစ်ယောက်က အတင်းဆောက်ပေးသွားသောကြောင့်သာ ယခုလို အိမ်ပီပီသသ ဖြစ်လာသည်မှာ သိပ်မကြာလှသေးဟု သိရပါသည်။ ဆရာကြီးသည် မြန်မာပြည်တွင် ရှာမှရှားသော အနုပညာရှင် စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးဆွဲခဲ့သော ပန်းချီကားပေါင်းမှာ ထောင်ချီရှိနေသှောလည်း မြန်မာပြည်တွင် သိပ်မရှိလှတော့။ (နေမျိုးဆေးထံတွင် ဆရာကြီး၏ကားများ ၃ဝဝခန့် ရှိသည်ဟု သိရသည်)။ ဆရာကြီး၏ ပန်းချီကားများကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါသည်။ ထို့အတူ ဆရာကြီးကိုလည်း လေးလေးစားစား ရှိသင့်ပါသည်။ ပညာကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါသည်။ တတ်နိုင်သူများအနေဖြင့် သူခိုးဈေးဖြင့် ပုတ်ပြတ် မဝယ်သင့်ပါ။ ကျွန်တှောသည် ဆရာကြီး ကွယ်လွန်သွားမည်ကို စိုးရိမ်နေမိသည်။ ဆရာကြီး၏ အတဿထုပဿပတဿတိကျမ်းပြုသူ တစ်ယောက်က ဆရာကြီးသည် ပိုက်ဆံစကား ပြောတတ်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သူ့ထံလာသူ အများစုမှာ ဆရာကြီးထံမှ ပန်းချီကားများကို အချောင်သာသာဖြင့် ယူသွားတတ်ကြကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြပါသည်။ ကျွန်တှောသည် ဆရာမြို့မငြိမ်း မသေခင်က သူ့သမီးကို ပြောခဲ့သော သူတို့က အဖေ့ခေါင်းကိုသာ လိုချင်ကြတာ ဆိုသော စကားတစ်ခွန်းကိုသာ အမှတ်ရနေမိပါတော့သည်။
Posted by NLS at 6/11/2007 11:55:00 AM 1 comment Links to this post
Labels: Arts, Diary, Interview, Memoir
Last year, I posted about Nga Mauk Ruby on Myanmar Cultures Blog. Then I havent update that blog foralong time, and today I found one comment from Mr. Tideman. Some of his words are interesting!
Thank you for this very detailed report, being that when the British empire (reference the old saying: the sun never sets on the British empire) "dethroned" or deposed* King Thi Baw in 1885, there was some British Army officer with the title and name of Colonel Sladen who was "the main person" who "arrange(d) for the Royal Treasure" to be dealt with by "the Royal Treasure Protect committee"** (made up of: #___ people being: ____________________ ?) but which did NOT include the Ngamauk Ruby said to be "worthacountry" but see http://www.palagems.com/burma_ruby.htm said to be "worth half his kingdom.
Technically to depose is "to remove from office or position of power", and so is not an act of war, or is it? The expression of: to the victor go the spoils of war, at presumably the 100% level, but there seems to be some entrustment of these Royal Gems and "jewellery" that went inside the Gold Boxes, Laquare Boxes and Velvet Bags for their safekeeping and future re-turn to the royal family, but when? After King Thibaw had served his time in prison? It reads like what King George V of England did to King Thibaw was like what King George, the Third did to us here in America that brought on our Revolutionary War, and that was that our many repeated petitions went not only un-answered, but resulted in more injuries! So when "the relatives of Sladen presented Padamya Ngamauk to Queen Victoria" it was like what? The payment of half the kingdom onaWrit of Elegit? whereamoiety or half is allowed the debtor to live on? Hey! This Royal Family had 100% taken! So what next for the "sons of the fourth daughter of King Thibaw" who "ask"ed the British "to give back Ngamauk Ruby and royal gems and jewellery on9May 1953 and on 16 February 1959"? Who are their next-of-kin: _________? and WHERE do they live now plus WHY don't they find out who was on this committee** and bring their report to the attention of the Queen Elizabeth to finally act on their recomendation that ___% be returned as by deducting ___% for what? the cost of mainting their empire for #___ years (asaprotection racket) before it now gone military dictatorship, like Cuba according to the http://www.ruby-sapphire.com/burma_embargo.htm citing the Burmese Freedom and Democracy Act of 2003 (HR 2330) signed into law by U.S. President Geo. W. Bush on July 28th, 2003 wanting other countries to join in by some United Nations Resolution #____ too? and what about any signatories from the Britain? shouldn't they have to be of honor BEFORE they sign such, as by the return of this treasury?
Yours truly, Joe / Joseph S. Haas, P.O. Box 3842, Concord, New Hampshire 03302, Tel. 603: 848-6059 who went thruaSheriff's Sale is "how" I encountered this Writ of Elegit stuff, and an historian plus Excavation Technician I archeologist, IN SEARCH OF...the buried treasure of Passaconaway, the Native American Indian Chief who buried his treasury on the summit of Mount Agamenticus over in York County, Maine, and found by the U.S. Army during WWII with any records sent to the Federal Archives on Trapello Road in Waltham, MAss.achusetts then sent to the Federal Archives in New York for #__ years, then supposedly these records of WHO found and kept these treasures were destroyed.
pc: my new Federal Representative ________ to Congress in Washington, D.C. to please investigate this and our own State of New Hampshire http://www.state.nh.us Gold Bonds on file with the Secretary of State from the Czar of Russia before it went to the Communists, now out of power, and so now redeemable too? fromagovernment honoring all past debts? To find out WHO the current American Ambassador to Britain is: _________ too, so that he can present some HR #____ of 2007 from the House of Representatives to the Queen to finally conclude this matter, gaining more respect for other countries to join in H.R. 2330, that is for us to take the first step of helping give back to that country's royal family this quality ruby of 82 carats BEFORE we "take" more rubies of less #__ carats therefrom either direcly without the boycott, or indirectly through other countries, currently supplied such by the smugglers.
note: See also http://www.imdb.com/title/tt0529685/ for "The Burma Rarity" (1961) episode of Bonanza, also over at Rick's "The Scenery of the Ponderosa" http://www.voy.com/75280/
Click! here is original post
Posted by NLS at 6/08/2007 06:52:00 PM0comments Links to this post
Sooner or later my own website will be published!
Posted by NLS at 6/07/2007 12:12:00 PM0comments Links to this post
Labels: My Designs, Website
How to retouch your photo for good looking
ပြင်ဆင်ချင်သော မူရင်းပုံကို ဖိုတိုရှော့(ပ်)တွင် ဖွင့်ပါ။
အဆင့် ၁ ။ မူရင်းပုံကို နောက်လေယာ တစ်ခုတွင် ကူးပြီး Healing Brush ကိုအသုံးပြုကာ မလိုချင်သော အမှတ်များ၊ ဝက်ခြံများ၊ အမာရွတ်များ၊ မှဲ့ များကို ဖျက်ပါ။
အဆင့် ၂ ။ အဆင့်၁မှ လေယာကို နောက်တစ်လေယာတွင် ကူးယူပြီး Curve(Clt+M) ကိုအသုံးပြုကာ အလင်းအမှောင် အနည်းငယ်တိုးပေးပါ။
အဆင့် ၃ ။ အဆင့်၂မှ အလင်းအမှောင်တင်ပြီး ပုံကို နောက်တစ်လေယာတွင် ကူးယူပြီး Surface Blur အနည်းငယ် ပေးရပါမည်။
အဆင့် ၄ ။ ထို့နောက် Image>mode>Lab Color ကိုရွေးချယ်ပါ။ (Flatten မလုပ်ပါနှင့်)
အဆင့် ၅ ။ Layer Palette တွင် Layer ကိုရွေးချယ်ထားရာမှ Channel ကိုသွားပါ။ ထို့နောက် Lightness ဆိုသောလေယာ တစ်ခုတည်းကို ရွေးပြီး Clt+Click လုပ်ပေးပါ။ Selection ပှေါလာလျှင် Clt+C ကှောပီလုပ်ပါ။
ပြီးလျှင် Channel မှ Layer သို့ ပြန်သွားပါ။ လေယာအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး အခုန ကှောပီလုပ်ထားသော လေယာကို Paste လုပ်ပေးရမည်။ ထိုအခါ လင်းပြီး ဝါးတားတား ဖြစ်နေသော ပုံကို မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၆ ။ အဆင့်၃မှ Surface Blur ပေးထားသော လေယာကို ခဏဖျောက်ထားပါ။
အဆင့် ၇ ။ အဆင့်၂ လေယာကို နောက်လေယာ အသစ်တစ်ခုတွင် ကူးယူပါ။ အဆိုပါလေယာကို အဆင့်၅လေယာ၏ အောက်တွင် ထားပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Filter>Others>High Pass ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအရာကို ရွေးချယ်သောအခါ သင်လိုချင်သော ပုံ၏ ကောက်ကြောင်းများ ပှေါလာသည်အထိ တန်ဖိုးဂဏန်းများ ပြောင်းလဲပေးရမည်။ အဆိုပါလေယာ၏ Blending Mode ကို Overlay တွင်ထားပေးသောအခါ အနားသတ်လိုင်းများ ပြန်လည် ထင်ရှားလာသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ပုံ၅နှင့်ရကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၈ ။ လေယာအားလုံးကို Flatten လုပ်ပါ။ ရလာသောလေယာကို Level အနည်းငယ် တင်ပါ။ Burn နှင့် Dodge Tools များ အသုံးပြုပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပါ။ ပုံ ဂနှင့်ရကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၉ ။ အဆင့်ဂမှ လေယာကို နောက်တစ်လေယာတွင် ကူးယူပြီး အဖြူအမည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။ (Clt+Shift+U) ထိုလေယာ၏ Blending Mode ကို Luminosity သို့ပြောင်းပြီး Opacity ကို ၄၀ လောက်အထိ လျှော့ချပါ။ ထိုအခါ ပုံရှိ အရောင်ရင့် နေရာများ ပိုအားကောင်း ပြတ်သားလာသည်ကို တွေ့ရမည်။ (မှတ်ချက်။ ထိုအဆင့်တွင် အသားရောင်လည်း အနည်းငယ် အဖြူအမည်းဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်သည်။ မဖြစ်စေလိုပါက အဆိုပါ အဆင့်ကို ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိုအဆင့်ကို ပြုလုပ်ပြီး Masking နည်းဖြင့် အသားနေရာများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်)
အဆင့် ၁၀။ လေယာအားလုံးကို နောက်တစ်ခါ Flatten လုပ်ပါ။ ရလာသော လေယာအပှေါတွင် အလိုရှိပါက Filter>Render>Lens Flare effect ကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်သလို ဖန်တီးယူနိုင်ပါသည်။
Here is Stey by Step photo rendering (393Kb)
not allow to redistribute on any type of media
model : aps
photo : nls
Posted by NLS at 6/05/2007 03:52:00 PM0comments Links to this post
Some Web Design Concepts
I found most of myanmar web designs were not attractive, not active, not match with website, no eye catching, no artistic expression and not modernized, though designers who created them were not bad in software usage, but in creativity. So, most of them were not lured to visit again. Although I m notagood web designer, but I still can mix up and standardized them with design principles, concepts and ideas.
Here are some of my poor tips-
When you have been proposed to createaweb design,
Questioning everything relating with your design; how they want, what is their desired theme, what colors they prefer, what type they like (fancy or steady) etc:
Ask them to give nice photos to use in your design, if not, takeagood camera and shot nicely.
Study carefully who are they, what they really do and what is their type.
Choose best related colors based on their want (no need to use exactly what the want, use your brain)
Think! simply, design for woman should be soft, pale and simple. for man, strong and distinct colors, lines.
Play around with Typography (no need to use same size. who teach you?)
Play around with different possible layout
Plan what kinda prgm language that you will use.
Sit and look your design more than 30 minutes foratime, frequently again!
Should not use more than3type face
Do not usealot colors
Dont need to follow your seniors or your teachers' designs, be creative!
Do not afraid to delete, to resize or to crop
Always keep in your mind that Logo and Slogan are most important
Last the most important one! Remember if you feel you are not still satisfy your design, surely! nobody will like it!
etc: (fill up whatever you want)
A Japanese artist Ms. Yokoyamada didnt give me much of her artworks, and the pictures she gave me were not so clear. So I cropped some part and created my own design. She asked me make simple and speed up design. So I do!
I spent2week to creat Artist Nyein Chan Su's web design. Ko NCS gave me whatever I want and asked me to create freely. He isamodern artist and the colors he used in his most paintings are so basic. So I decided to use R, B, Y as main and only colors. He wanna make different design for different page. It's not difficult but it can be problem when users are browsing. I was very very tired.
The third one is for lexiconstar's Celebrities page.
Currently I m inspiring for my greatest artist Khin Maung Yin site. 75% finito! I wish it could be represented to him well.
Posted by NLS at 6/04/2007 05:09:00 PM0comments Links to this post
Labels: How To, My Designs